ကုနျးပါ့မယျ - Owl Myanmar News
အဲဒီလောကျကွီးမကွမျးနဲ့ကှာ .. နာတယျ”” ပူကနဲ နားထဲတိုးဝငျလာသော အသံကွောငျ့ ခွေ အစုံကို ဖတျြကနဲ ရပျလိုကျရသညျ။ ““ဘှတျ စှပျ ဘှတျ ဘှပျ စှပျ စှိ ပွတျ”” ““ဟို့ အိုး အိုး ကြှတျကြှတျ အရမျးကွပျတာပဲ ကှယျ”” ““နာရော နာသေးလား ဟငျ”“ ““အ အ အခုန လောကျတော့ မနာတော့ဘူး”” သုံးထပျသား ခနျးစညျး လေးအတှငျးမှ တီးတိုးသံလေးမြားကို သူ့နားက သဲသဲ ကှဲကှဲဠကွားနရေသညျ။ ““ကောငျးလိုကျတာ အငျး အငျး အငျ့ အငျ့”” ဒါ ထကျကြျောအသံ သူမှတျမိသညျ။ ကောငျမ လေးအသံက မပီမသ ဗလုံးဗထှေးနှငျ့ ညီးတှားသံ တိုးတိုး လေးစုပျသပျနသေံလောကျသာ ထှကျပျေါနရော မသဲကှဲ။ ဝိုငျးခဈြအုံဆိုသော ခလေးမလေးပငျဖွဈ နလေသေလား။ ခှနျဂြာ့ရငျသညျ အတိုငျးအဆမဲ့စှာ တုံရီလှုပျရှားလာ၏။
လကျထဲမှ ကူးပွီးသား ဓါတျပုံအိတျကို စားပှဲပျေါ အသာခထြားကာ အခနျးတှငျးသို့ တံခါးကို ဟလကျြ ခြောငျးကွညျ့လိုကျသညျ။ ““မွနျမွနျလုပျ အဈကိုရယျ မပွီးသေးဘူးလား”” ““ပွီးတော့မှာပါကှယျ တအောငျ့လေးနျော ..နျော””ထကျကြျောဖငျကွီးက လုံးဝပွောငျစငျကာ လုံခညျြမရှိ အောကျမှပကျလကျအနအေထားနှငျ့ပေါငျနှဈခြောငျး ကားထားသော ကောငျမလေး စောကျပတျထဲသို့ ထကျ ကြျောလီးကွီးက ပိုငျ ရိုကျသှငျးနသေလို စိုကျ စိုကျဆငျး နသေညျ။ ““ဝိုငျး”” ရယျဟု သူက မကျြရညျဝဲစှာ ရရှေတျ သညျ။ မနုဿမုဆိုး ထကျကြျောလကျအတှငျး သကျဆငျး မိမှတော့ ဝိုငျးဘ၀ ဤသို့သာ ကားလိပျခရြမညျကို ခှနျဂြာ ကွိုတငျသိထားနသေလိုပငျ။ စောကျပတျနှဈခွမျးက ကွီးမားသော လီးမဲမဲ ကွီးအဝငျအထှကျ၌ ဘေးသို့ ပွနျ့ကားလိုကျ စုလိုကျဖွငျ့ လှုပျရှားနသေညျ။ ထကျကြျောဂှေးစိကွီးကမူ စောကျဖုတျ အောကျခွေ ဖငျနှဈခွများကားကို ဖတျခနဲ ဖတျခနဲ မှနျ မှနျရိုကျပေးနသေညျ။
မိုးပျေါသို့ ဖဝါးလှနျကာ မွောကျထားသော ကောငျမလေးခွခြေောငျးလေးမြား ကုတျကှေးနရှော သညျ။ ““ဆောငျ့ .အငျ့ အငျ့ နာနာလေး အဈကိုရယျ”” ““ဒါနဲ့ ဆောငျ့တာ နာတယျဆို”” ““အဟှနျး နာလို့ နာတယျ ပွောတာပေါ့ ခုမှ မနာတာ”” ထကျကြျောဖငျကွီးကို ဆှဲမွောကျလိုကျ၏။ လုံးပတျ ငါးလကျမနီးပါး ကွီးမားကာ စောကျရမြေားနှငျ့ ပွောငျလကျနသေောလီးကွီးက စောကျဖုတျလေးထဲမှ ကြှတျလုနီးပါးထှကျလာသညျ။ စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေး အောကျခွေ၌ ဖွူလှလှ မွုပျပူစီဗောငျးလေးမြား အစီအရီ စုပွုံတှဲခိုနကွေသညျ။ တငျးတငျးလေး စသှေ့ားသော အကှဲကွောငျးကွား၌ လီးဒဈကွီးကား အပွငျသို့ ငါးမြှာခြိပျ တဈခြောငျး လို ဆှဲထှကျလာသညျ စောကျပတျအတှငျးသား ရဲရဲ လေးမြား လနျထှကျလာ၏။ ““ရှူး အား ကြှတျကြှတျ အဈကိုရယျ အဈကို့ ဟာကွီးကို ဆှဲထုတျလိုကျတာ ရငျထဲကို ဟာတာတာကွီး ဖွဈပွီး ကနျြရဈတာပဲ တဈမြိုးကွီးနျော .. အငျးဟငျး ဒါဖွငျ့ အမွဲတတျထားပေးမယျလေ ဟငျ သှား ဒီက အ ကောငျးပွောတာ ဆောငျ့မယျနျော စောကျပတျကို လကျ နဲ့ဖွဲထား မောမော ဟိုကျဟိုကျအသံနှငျ့ ထကျကြျော အ မိနျ့ပေးသလိုပငျ ကနုကမာ ရောငျတောကျနသေော လကျသညျးရှညျေလေးမြာပါသညျ့ လကျခြောငျးဖှေးဖှေး လေးနှဈဖကျက စောကျပတျကို ဆှဲဖွဲပေး၏။
အစိလေးကပွူးပွီး ထောငျနသေညျ။ ထိုစောကျ စိအောကျခွအေတှငျးပိုငျး အသားနုလေးမြား လှုပျလှုပျရှရှ ပျေါထှကျလာသညျ။ စောကျပတျအတှငျးမှ ကွ ထှကျနသေော စောကျခေါငျးဝ အသားစိုငျမြားက အမဲ သားနှယျ ရဲရဲနီကာ လီးထိပျကွီး မဝငျမီ ခတ်ေတမြှ ပိတျဆို့ နကွေ၏။ ““ဘှတျ””ခနဲ အသံနှငျ့အတူ ထကျကြျော၏ လီးထိပျကွီးက စောကျခေါငျးထဲသို့ စိုကျနဈ တိုးဝငျ သှားသညျ။ ““အီး ဟီး ကြှတျကြှတျကြှတျ”” ကောငျမလေး ညီးတှားပုံက မခြိမဆျ့နိုငျလှနျးလရော ကွားရသူ ခှနျဂြာရငျ၌ပငျ နငျ့တငျ့တငျ့ကွီးဖွဈသှားစလေသေညျ။ ထကျ ကြျော၏ ရာဇဝငျလူဆိုး စာရငျးဝငျ ပစ်စညျးကွီးက အသဈ စကျစကျ စောကျပတျလေးအတှငျးသို့ ပယျပယျနယျ နယျကွီး လိုးဝငျနသေညျမှာ ရှညျကွာလှနျးလှသညျဟု သူထငျလသေညျ။ ဝငျသညျ ဝငျနသေညျ ဝငျနဆေဲ ကာလမှာပငျ ထကျကြျောဖငျကွီးက တဖွေးဖွေး နိမျ့ဆငျးနသေညျ။ ““အငျး .. ဟူသော ကောငျမလေး၏ ညီးတှား သံလေးက ထကျကြျောလီးကွီး အဆုံးရောကျမှ အငျ့အငျး ဟု အဆုံးသတျလိုကျသညျကိုလညျး တှရေ့ကွားရ၏။ ထကျကြျောက လူယုတျ .. စောကျပတျနှငျ့ ဖငျအကှဲကွောငျးစပျကွား အသားနုနရောလေးကို လကျညှိုးဖွငျ့ ရဈဝိုကျပါတျသပျပေးသညျ။
လီးကွီးအဆုံးဝငျ ထာသဖွငျ့ တနငျ့တပိုးခံစားထားရသော ကောငျမလေး ခမြာ ဖငျကွားကို လကျညှိုးနှငျ့ အမှခေံရသောခါ ကတုံ ကရီလေးဖွဈလာသညျ။ စောကျပတျနှဈခွမျးက ထကျ ကြျော၏လီးတနျကွီးကို ခါးသိမျသှားမတတျ ယောငျ၍ ယောငျ၍ ညှဈပွဈလိုကျရှာသညျ။ အခနျးဝမှခြောငျးနေ သော ခှနျဂြာဘကျသို့ ဖငျနှဈခုက လှညျ့ထားလရော ထိုသို့ ကောငျမလေး စောကျပတျကို ညှဈလိုကျခွငျးကို ခှနျဂြာ ထငျထငျရှားရှားကွီးတှလေို့ကျရသညျ။ထိုအခါ ဘာမဆိုငျ ညာမဆိုငျခှနျဂြာ့လီးအရငျးက ““တငျး””ကနဲ ယောပွီးခံစားလိုကျမိပွနျသညျ။ ““ကှာ အဲလို မလုပျနဲ့ ဟငျ့ ဟငျ့ မလုပျပါနဲ့ဆို”” ““ခံလို့မကောငျးလို့လား ဟငျ”” “ ယားတယျ ဖငျထဲက တဈမြိုးကွီးပဲ”” ““ဒါဖွငျ့ ဖငျကိုလိုးပေးမယျလေ”” ““ဟေ့ အေးကှာ အဲဒါတော့ မလုပျနဲ့”” ““ခံကွညျ့ပါအုံး မကောငျး တော့မလုပျဘူးပေါ့ ဘယျ့နှယျလဲ”” ““ဟငျ့အငျး ဟငျ့အငျး မဟုတျတာသိပျလုပျခငျြတာပဲ”” ““စောကျပတျကအမွဲ လိုး နရေတာ ရိုးနပွေီ နျောလို့”” ““ကြှတျ အကိုကလဲ ရှဖေ့ငျ ပဲလုပျပါကှာ”” ထကျကြျောဘာမှ ဆကျမပွောတော့ ကောငျမလေးဖငျကွားကိုမှနေသေော လကျခြောငျးက လီးတနျ နှငျ့အတူ စောကျပတျထဲသို့ ညငျညငျသာသာ ယှဉျတှဲ ထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ ကွညျ့ပါလား လကျကောလီးရော နှဈခုသှငျး ပွနျပွီ အဈကိုကွံကွံဖနျဖနျ သိပျလုပျတာပဲ နာတယျ သိလား။ ထကျကြျောလီးဘေးမှ လကျညှိုးကို ပွနျနှုတျ လိုကျပွနျသညျ။
ဖငျကွီးကို မွောကျခါ မွောကျခါ ခတျ သှကျသှကျလေး ဆောငျ့လိုကျ၏။ ““ဘှတျစှတျ ဘှတျစှတျ ကှိ ပိ ဘှတျစှပျ”” “အငျ့““အငျ့ အငျ့ အငျ့”” ““အဈကို့လီးကို အားရရဲ့လားဟငျ ခြိုမာ”” ““အိုး ဘာတှမေေးမှနျးမသိဘူး သှားကှယျ”” ခြိုမာတဲ့ ဝိုငျးမဟုတျ တျောပါသေးရဲ့ ခှနျဂြာ ရှသေို့ခွတေဈလှမျးတိုးဖွဈသညျ။ သောက ကငျနိုငျ သော စိတျနှငျ့လညျး လီးကဆတျခနဲ ဆတျခနဲတောငျ ပပေပွေီ။ ““ခြိုမာ အားမရမှာစိုးလို့ပါ”” ““အမလေး လေး အဈကိုရယျ ဒီလောကျဟာကွီးနဲ့ ခြိုမာ့ဟာလေးထဲ လုပျနတောတောငျ သလေုနီးပါးခံနရေတာ ဒီထကျကွီးရငျတော့ စုတျပွတျကုနျမှာ ဟငျး ဟငျး ဟငျး ”” နှဈ ယောကျသားငွိမျသှားသညျ။ ထကျကြျောဖငျကွီးက အကွောဆှဲသလို ဆတျခနဲ ဆတျခနဲ တုံခနတေုနျးဖွဈသညျ။ခြိုမာဆိုသော ကောငျမလေးက ထကျကြျော ဖငျကွီးကို ဆှဲကာ ဆှဲကာ ဆောငျ့ရငျး တဟငျးဟငျး တအငျးအငျးနှငျ့ တှနျ့လိမျ နရှောသညျ။ ထကျကြျောလီးကွီးက ခြိုမာ့၏စောကျ ပတျလေးအတှငျး၌ အရငျးအထိ စိုကျဝငျကာ တှငျး အောငျးရငျးအတှငျး၌ တုံခါနမေညျကို ခှနျဂြာ တှေးမိ လသေညျ။
ထကျကြျောပုခုံးကိုမေးတငျကာ မှိနျးနေ သော ကောငျမလေး မကျြနှာကိုအခုမှ သူတှရေ့သညျ။ ငယျရှယျနုနယျလှနျးသော ခြာတိတျမလေး မကျြနှာက ကျောပတျရုပျကလေးနှယျ သနျ့စငျလှပသညျ။ နကျမှောငျသောဆံပငျလေးမြားက ပနျးနုရောငျ ခေါငျး အုံးကွီးပျေါ၌ ပြံဝဲ ဖှာဆငျးနသေညျ။ မှေးစငျးထား သော မကျြလုံးအစုံသညျ တလှုပျလှုပျ ..။ ““နောကျတဈခြီ လုပျအုံးမလား”” ““ကြောငျးလှတျ ပွီးပွီ ကို ရဲ့ ကြောငျးပွနျနောကျကရြငျ အမဆေူမှာ နောကျမှနျော နျောလို့” ” ခြိုမာသဘောပါ”” ငနဲသားအသံ က မကနြေပျသလိုလို ဝမျးနညျးသလိုလို “ “လုပျပွီ ကိုကလဲဒီလောကျလုပျရတာကို အားမရနိုငျဘူး သူ့မှာ” ” ခြိုမာ့ဖကျကလဲ ပွနျကွညျ့အုံး”” ထကျကြျောက နှာခေါငျး မှ ဟငျးကနဲသကျပွငျးမှုတျထုတျရငျး ခြိုမာ့ဗိုကျပျေါမှ ခှာ၍ထသညျ။ခြိုမာရော ထကျကြျောပါ စောကျပတျနှငျ့လီးတို့ပွိုငျတူငုံ့ကွညျ့မိကွသညျ။ သုတျရမြေား စေးကပျပွဈခြှဲနသေော စောကျ ပတျအတှငျးမှ ထကျကြျောလီးကွီးကို ဖွေးဖွေးခွငျးဆှဲ ထုတျလိုကျသညျ။ ““နဲနဲပြော့သှားပွီ ..နျော”” ခြိုမာက လီးတနျကွီးကို လကျခြောငျးအဖြား လေးမြားနှငျ့ ကိုငျရငျးထကျကြျောကိုမော့ကွညျ့ရငျး ပွော လိုကျလသေညျ။ ““နောကျတဈခြီလောကျလိုးရငျ ရသေးတယျ”” ““တျောပါတော့”” ခြိုမာက မကျြစောငျးလေးထိုးကာ ပွုံးရငျး ရှကျစနိုးလေးပွောသညျ။ ထကျကြျောရငျဘတျကွီး ကို ပွတျခနဲ နှုတျခမျးနှငျ့စုပျပွီးမှ ကုတငျခွရေငျးတှငျ အေးစကျစှာ ပုံထားသော ထမီစိမျးလေးကို လှမျးယူ လိုကျခါ ခွထေောကျမှစှပျသညျ။
ထကျကြျောက အရှိနျ မသသေေးပဲ ခြိုမာ့မကျြနှာနုနုလေးကို လကျနှဈဖကျနှငျ့ ဆှဲယူကာ နီစှေးရှမျးစိုသော နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို ခြိုမွိနျ စှာ စုပျယူလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ကုတငျပျေါမှာပငျ မတျတတျရပျလိုကျလရော ခပျငိုကျငိုကျကွီး တှဲကနြသေော လီးကွီးက ခြိုမာပါးစပျလေးနားတှငျရောကျသှားလေ၏။ ““ဟငျး သှား”” ခြိုမာက ကဗြာကယာ မကျြနှာ ကို လှဲဖယျပွီး ကုတငျပျေါမှ ဆငျးလိုကျသညျ။ ထကျ ကြျော ပုဆိုးကိုလဲပွဈပေးလိုကျသညျ။ ““ဒါပဲနျော ကို ခြိုမာ ကတော့ တဈကိုယျလုံးပေးပွီးပွီ ခြိုမာ့ကို သစ်စာဖေါကျရငျတော့ မလှယျဘူး”” အာဂ ခြာတိတျလေးပဲဟု ခှနျဂြာတှရေငျး အ ခနျးဝမှခှာသညျ။ စားပှဲရှိ ဓါတျပုံအိတျပျေါ၌ ကမျးက တမျး ခှနျဂြာဟု လကျမှတျထိုးကာ အိမျပျေါမှ အလငျြ အမွနျဆငျးလိုကျသညျ။ဝိုငျး မဟုတျခွငျးအတှကျ သူပြျောသှားမိခွငျးကို ပွနျလညျ စမျးစဈကွညျ့သညျ။ ခြိုမာဆိုသော ကောငျမ လေးနှငျ့ ထကျကြျောတို့ ဇာတျလမျးကိုဝိုငျးသိလငျြ .. စငျစဈကတော့ ဝိုငျး မသိသော ထကျကြျော၏ ပုံပွငျမွောကျမြားစှာရှိနသေေးသညျကိုမူ ခှနျဂြာ သိနေ ခဲ့သညျ။ အငျးလေ ဒါကွောငျ့ပဲ ဝိုငျးအုံခဈြ ဆိုတဲ့ ကောငျ မလေးအတှကျ စိုးရိမျမိတ ဖွဈကောငျးဖွဈမှာပါ နော။ အိမျပွနျရောကျတော့ ရမွေနျမွနျခြိုးပွီး သံပုရာရညျ ခဉျြခဉျြတဈခှကျကိုသောကျပွဈလိုကျရသညျ။ အလုပျစားပှဲအတှငျးမှ ဝိုငျး ၏ အောကျစလှတျနသေော ဓါတျပုံလေးကို ထုတျကွညျ့လိုကျမိသညျ။
မ ကွာမီလေးတငျကမှ တှခေဲ့ကွုံခဲ့ရသော ခြိုမာဆိုသော အထက ကြောငျးသူလေး တဈဦးနှငျ့ မနုဿမုဆိုး ထကျ ကြျောတို့၏ နပှေဲ့ကွီးကို မကျြဝါးထငျထငျကွညျ့မွငျခဲ့ရ သော ခှနျဂြာအဘို့ အောကျစလှတျကာ စောကျဖုတျအ ကှဲကွောငျးလေး ထငျးနအေောငျ မွငျနရေသော ဝိုငျး ဓါတျပုံလေးကို ကွညျ့ရုံမြှနှငျ့ပငျ ခှနျဂြာ လိုးခငျြစိတျမြား တဟုနျးဟုနျးတောကျလောငျလာသညျ။ အလုပျစားပှဲ၌ထိုငျရငျး လီးကွီးကို တငျးတငျး ဆုတျထားမိ၏။ ဒိတျကနဲ ဒိတျကနဲ လကျဖဝါးကို သှေး တိုးနသေညျ့ အထိ အတှကေို့ခံစားနရေသညျ။ လီးထိပျ မှ ခြှဲပွဈသော အရကွေညျမြား ယိုစီးလာ၏။ ထကျကြျော ကဲ့သို့ သူမြားသားပြိုသမီးပြိုလေးမြားကို ဖကျြဆီးလို သောဆန်ဒလဲမရှိ။ ယောကျြားပီပီ ကိုငျခငျြသညျကတော့ အမှနျ။ ထို့ကွောငျ့ ပုဆိုးကို အသာလြော့ခလြိုကျသညျ မတျထောငျနသေောလီးကွီး တဈခြိနျက ရှယျရှယျဆို သော ကောငျမလေးကို အကွိမျပေါငျးမြား စှာလိုးခဲ့သော လီးကွီး .. ယခုမူ စောကျပတျနှငျ့ဝေးကှာ နခေဲ့သညျမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာခဲ့ပွီး လီးဖွဈပါလကျြ လီးအစာ မစားရသော ခှနျဂြာ့လီးကွီး ဘာကွောငျ့ ဝွဖိုးနသေနညျး.. မသနျမစှမျးခြိနဲ့စှာ လူမမာတဈ ယောကျနှယျ ပြော့တိ ပြော့ခှဘောလို့ မဖွဈရသနညျး။ စိတျက ပူထူနသေညျ ယခုကဲ့သို့ ကာမဆန်ဒဖွဈပှားပေါကျကှဲမှုမြိုး မကွာခဏခံစားရသျောလညျး ယခု ဝိုငျးစောကျဖုတျကွီးကို ဓါတျပုံထဲ၌ ထငျထငျရှားရှား ပွတျပွတျသားသားတှရေ့မှ ပို၍ ခံစားရသညျ။ ထိုစောကျ ဖုတျကွီးကိုပဲ လိုးခငျြနမေိသညျ။ လကျတှငျး၌ ဆုတျကိုငျ ထားသော လီးကွီးက လကျဆုတျအာနအေောငျ တုတျ ခိုငျထှားကွိုငျးနသေညျ။ ရှယျရှယျနှငျ့ အိမျထောငျကစြဉျက သူ့လီးဤမြှလောကျမကွီးသေးဟု သူထငျသညျ။
ထိုစဉျကသာယခုလောကျကွီးသော လီးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့လငျြ မညျမြှ ကောငျးမညျနညျး။ ““မောငျ့လီးက လီးသူခိုး သိလား ဟငျးဟငျး”” ရှယျရှယျနှငျ့လကျထပျပွီး ၈-မိုငျမှေးမွူရေး ခွံ၌ပငျ လှတျလပျစှာနထေိုငျခဲ့ကွပွီး နညေ့ အခိနျမရှေး ကဈကွသညျ။ ရှယျကလညျး မောငျ့သဘော မောငျပိုငျ ဆိုငျသော စောကျဖုတျ .. မီးခွဈတဈလုံးနှယျ အိတျထဲ ဆောငျထားရသလို အလှယျတကူပငျ ထုတျယူသုံးစှဲ နိုငျခဲ့သညျ။ ဆိုပါတော့ ရှယျရှယျ ရခြေိုးပွီး ထမီရငျလြား နှငျ့ သနပျခါးလိမျးနလေငျြ သနျ့စငျလတျဆတျသော ရှယျ့နို့လေးနှဈလုံးကို အနောကျမှ သိမျးဖကျ ဆုတျနယျခြေ မှမိတတျသညျ။ ထမီကို ရငျလြားမှ ခြှတျလြောခလြိုကျ သောအခါ ရဆေေးငါးကွီးနှယျ သနျ့သနျ့ ရှငျးရှငျး ရခြေိုး ပွီးစနို့ကွီးနှဈလုံးကို အေးသော အထိအတှနှေ့ငျ့စို့နမျး ပွဈမိတတျသညျ။ ထိုအခါမြိုး၌ ရှယျ့လကျကလေး တဈဖကျက မောငျ့ပေါငျကွားမှ လီးကွီးကို ညငျညငျသာသာလေး ဆုတျကိုငျပေးတတျလာ၏။ ရှယျရှယျ သနပျခါး မလိမျး ဖွဈတော့ ကြောကျပွငျ ဘေးမှာပငျ ရှယျရှယျလှဲအိပျခါ ထမီကို ခွထေောကျမှဆှဲခြှတျခွငျးခံရရှာသညျ။ ဝတျလဈ စလဈနှငျ့ ဖငျအခငျးမရှိ ခေါငျးအုံးမပါ မောငျ့လိုးခွငျးကို ခံရရှာပွနျ၏။ စောကျမှေးလေးမြား ရစေိုနေ၍ ညီညီ ညာညာကပျနလေငျြလညျးမောငျက တယုတယ လြှာ လေးဖွငျ့ ယကျပေးတတျသညျ။ဒါကိုပငျ ရှယျရှယျက မောငျ့ကို သိပျခဈြရသညျ။ ရှယျအပျေါ၌ မောငျက မရှံ မရှာ ခဈြပါလကေလားဟု အားနာ မွတျနိုးမှုနှငျ့ မောငျ လိုးလငျြ အခြိနျမရှေး အလိုးခံနခွေငျးဖွဈ၏။
ထိုစဉျက ယခုကဲ့သို့ စောကျဖုတျယကျခွငျး လီးစုပျခွငျးမြား ခတျေ မစား အအေိုငျဒီအကျ(ဈ)ရောဂါမသိသညျ့တိုငျအောငျရှံရှာဖှယျ ကာမဆကျဆံနညျးကို မွနျမာမြား ပီပီ အသုံးမပွုခဲ့။ အကယျ၍ မောငျကသာ အတငျးအကွပျ စုပျ ခိုငျးမညျဆိုလငျြ ရှယျရှယျ မစုပျပဲနမေညျမထငျ ရှယျ သညျ မောငျ့ကို အသဲကှဲမတျခဈြခဲ့ရှာသော မိနျးကလေးပငျ မဟုတျလား။ တဈည ကို မှတျမိသညျ။ အလုပျမြားသဖွငျ့ ည ပိုငျးမလိုးဖွဈကွပဲ အိပျပြျောခဲ့ကွ၏။ မောငျအိပျပြျော အိပျမောကနြစေဉျ မောငျ့လီးကို လကျဖဝါးနုနုလေးနှငျ့ ဆုတျကိုငျခွငျးခံလိုကျရသညျ။ မောငျလနျ့နိုးသညျ။ မောငျ နိုးလာမှနျး ရှယျသိသညျ။ ကွိုတငျ၍ အဝတျအစားမြား ခြှတျထားသော ရှယျက မောငျ့လီး သေးသေးလေးကို အမဲအူ ဆှဲသလို အရခှေံလေးခညျြးစုပျခါ ဆှဲတငျလိုကျ ပွနျခလြိုကျလုပျနေ၏။ ရှယျရှယျပါးစပျနှငျ့ စုပျနမှေနျး သိ လိုကျသောအခါ မောငျ့လီးကွီးက မကျြလှညျ့ပွလိုကျသ လို ခကျြခွငျး တောငျသှားသညျ။ ““မောငျ့လီးက လီးသူခိုးသိလား”” ဟုလီးထိပျပွဲ ပွဲကွီးကို လကျညှိုးလေးနှငျ့ တို့ထိကာ ရှကျစနိုးလေးပွုံး ကာပွောရငျး မောငျ့ပေါငျပျေါသို့ တကျခှသညျ။ မောငျ က ခါးကို နရောကအြောငျ ပွငျရှပွေီ့း မှယေ့ာပွငျကို တတောငျနှငျ့ထောကျခါ တဈဆဈခြိုး ငုံ့ကွညျ့သညျ။ ““ဟငျ့ မကွညျ့နဲ့ ရှကျတယျ”” ရှယျရှယျက မောငျ့ရငျဘတျကွီးကို လကျဖဝါးလေးနှငျ့ တှနျးလှဲပွီး ပွနျအိပျ စသေညျ။ မောငျက ရှယျ အမူအယာအတိုငျး စောငျစ ကို ဆှဲယူပွီး မကျြနှာကို အုပျထားလိုကျ၏။ ““ကွညျ့ပါလား တတျတယျ သူဒါမြိုး”” မောငျ့ရငျ ဘတျကိုလကျသီးလေးနှငျ့ ထုရငျး နှုတျခမျးလေးစူပွီး ပွောသညျ။
ငျက ရှယျကိုစတငျလိုးခဲ့ကွစဉျက ရှယျရှယျက ဤသို့ပငျ မကျြနှာကို စောငျဖွငျ့ အုပျထားခဲ့ သညျ။ ထိုသို့စောငျအုပျခါ ရှယျရှယျလုပျသမြှ ငွိမျပွီးခံစားရ သော အရသာမှာလညျး ကိုယျက ဦးဆောငျလိုးရသော အရ သာနှငျ့တော့ အတျောကွီးကှာခွားပွနျသညျ။ မကျြစကေို့ မှိတျခါအထိအတှကေို့ ရငျတဈခုံခုံခံစားရသော ယောကျြားတဈယောကျ၏ ညငျသာသော အထိအတှေ့ မြိုးကရှားပါးလိမျ့မညျထငျသညျ။ ရှယျရှယျက ယငျးသို့ နှေးထှေးစှာ ရငျခုံစေ တတျသော အပွုအမူလေးမြားကို ပွုတတျသညျ။ လီး ထိပျကို ခြှဲစေးသော အရလေေးမြားနှငျ့ ရောနှောကာ ပှတျသပျလကျြ နှိုးဆှပေးတတျသလို ဂှေးစိကိုလဲ မနာ မကငျြလေးဆုတျနယျလကျြ လီးတနျကွီးကို ဂှငျးတိုကျ ပေးတတျသေးသညျ။ ဤမြှ အပွုအစုကောငျးသော ရှယျရှယျ့အား ခြှနျဂြာဘယျသို့မေ့၍ရနိုငျပါမညျနညျး။ လီးထိပျကွီးကို စ ကောဝိုငျး လှုပျရှားရငျး စောကျပတျနှုတျခမျးသားမြားကို နှုတျခမျးနီဆိုးသကဲ့သို့ ပွုမူလတေိုငျး ခှနျဂြာပါးစပျကွီး အဟောငျးသားနှငျ့ အလှနျအမငျး အရသာထူးစှာ ခံစား ဖူးခဲ့ရသညျ။ ခဈြစှာသော ရှယျရှယျလေး၏ စိတျလကျပါ စှာဖွငျ့ ကိုငျတှယျလှုပျရှားမှုတိုငျး၌ ခှနျဂြာမမေ့မေူ့းမူး မြောပါခဲ့ရသညျ။ လီးအပျေါသို့ စောကျပတျအဝကို တပွေီ့း ညငျ သာစှာထိုငျခလြိုကျသောအခါ နှေးအီသော လီးထိပျမှ အရသာသညျ နှလုံးသားမှဆငျ့ကူးစိမျ့ဝငျ၍ တဈကိုယျ လုံးကို ပြံ့နှံ့ခံစားသှားစခေဲ့သော အထိအတှလေ့ေးမြား ယခုမူ ဝေးခဲ့ရပွီ .. စာရေးစားပှဲ၌ အတနျကွာ ထိုငျရငျး မာတောငျနသေော လီးကွီးကို ဆုတျကိုငျထားသော ခှနျဂြာ့လကျသညျ တငျးကဈြနေ၏။ လကျဖဝါးအတှငျး ၌ အကွောကွီးမြားထောငျကာ ဖုထဈရုးကွနသေော သူ့လီးကွီးကို ဘယျသို့ ဖွသေိမျ့ရမညျမသိအောငျ ခံစား နရေသညျ။ စားပှဲပျေါ၌ သူ့အား ပွုံးရှငျရှနျးစိုစှာ ကွညျ့ နသေော ဝိုငျးအုံခဈြ ဓါတျပုံလေးကို စိုကျကွညျ့လိုကျ သညျ။ ထမီအောကျစလေးလှတျနသေော ဝိုငျးအုံခဈြထိုငနပေုံလေးက ဖိတျချေါနသေလိုရှိသညျ။ မကျြနှာ လေးက ပကတိရိုးသားသနျ့စငျနခွေငျးအတှကျ ဓါတျပုံရိုကျစဉျ မိမိစောကျပတျကွီးကို အထငျအရှားပျေါလှငျ နသေညျကို မသိသညျမှာ သခြောသညျ။ ခှနျဂြာက လညျး နကျကတဈမြားရစဉျကတညျးက ထိုပုံလေးကို မကျြစထေဲ့၌ စှဲထငျနရော အပီအပွငျ ကူးပွီးသောအခါရငျ၌ အတိုငျးအဆမရှိ ဆန်ဒမီးက အဟုနျပွငျးစှာ တောကျ လောငျခဲ့ရလသေညျ။
လိုးခငျြစိတျမြား ထကွှလာလလေေ ခဈြခဲ့ရသော ရှယျရှယျကို သတိရလလေေ ဖွဈလာရ သညျ။ ရှယျရှယျသာရှိလငျြ သူမအခွအေနမြေိုး၌ ထမငျးပငျခကျြကွမညျမထငျ။ တဈယောကျတညျး ငိုငျတှကော ပုဆိုးကို ဆီးစပျအထိလြောကာ ကွီးမားတုတျခိုငျသော လီးကွီးကို ကိုငျထားလသေော ခှနျဂြာသညျ စတူဒီယို အခနျးဆီသို့ တဈစုံတဈယောကျ ညငျသာစှာဝငျလာ သညျကို သတိမထားလိုကျမိခြေ။ အခနျးတဈခုလုံး တိတျ ဆိတျငွိမျသကျလကျြရှိသညျ။ တဈဖကျဖှငျ့ထားသော ပွူ တငျးပေါကျမှ အေးမွသော လစေိမျးလေးက ညငျညငျ သာသာ တိုကျခတျနေ၏။ တဈယောကျတညျး ငွိမျ သကျနသေော ခှနျဂြာနှုတျခမျးအစုံသညျ တဆတျဆတျတုံရီနသေညျ။ လကျတှငျး၌ ဆုတျကိုငျထားဆဲဖွဈသော သူ့လီးကွီးမှာ ထိပျကွီး တငျးကာ ခရမျးသီး ကွီးတဈလုံးနယျ ပွောငျတငျးနီရဲနသေညျ။ ဆာလောငျ ငတျမှတျနသေော သူ့လီးကွီးကို ဆုတျကိုငျထားရငျး ခှနျဂြာ ဝနျးကငျြကိုမနေ့သေညျ။ အပွငျခနျးကတညျးက ဝိုငျး အသံပွုကွညျ့သညျ။ အိမျရှခေ့နျးတံခါးကွီး ပှငျ့နသေညျ့ အတှကျ စတူဒီယိုအဖွဈအသုံးပွုသော နောကျဖကျ အခနျးသို့ ဆကျဝငျခဲ့မိသညျ။ ဒါသညျပငျ ဝိုငျးအမှား ဖွဈကောငျးဖွဈပါမညျ။
စာရေးစားပှဲ၌ ငွိမျသကျကာ ဓါတျ ပုံတဈပုံကို စိုကျကွညျ့နသေော ခှနျဂြာ့ကို တှလေို့ကျရသညျ။ တဈကွိမျတညျးသော တှဆေုံ့သေးသော ခှနျဂြာ ကို ဘယျသို့နှုတျဆကျရမှနျးမသိ။ သို့သျော ခွလှေမျးတို့ က ခှနျဂြာ့အနီးသို့ တရှရှေ့တေို့းကပျသှားနမေိသညျ။ ထို အခါ ခှနျဂြာ့စိုကျကွညျ့နသေော ဓါတျပုံကို ဝိုငျး အ သအေခြာတှလေို့ကျရသညျ။ တှလေို့ကျမိသညျနှငျ့ တဈကိုယျလုံးရှိ ပုံမှနျစီး ဆငျးနသေောသှေးကွောမြား ရပျဆိုငျးသှားသလို ခံစား လိုကျရသညျ။ ဝိုငျး၏ ခွလှေမျးမြားတုံ့ဆိုငျးသှားကုနျ သညျ။ ရှတေို့းရခကျ နောကျဆုတျရခကျတှဖွေဈ ကုနျသညျ။ နှလုံးသှေးမြား တဒိုငျးဒိုငျးခုံအောငျလညျးခံစားရသညျ။ ရငျ၌ မောလှိုကျတုံရီသော ဝဒေနာကိုလညျး ခံစားရသညျ။ ဓါတျပုံက ဝိုငျးရဲ့ပုံလေ ကွညျ့ပါအုံး ထိုငျထား လိုကျတာ အောကျက ဟောငျးလောငျး.. ဘယျ လောကျရှကျဖို့ကောငျးလဲလို့ အိုး ထမီကွားက ထငျ ထငျရှားရှားကွီးပျေါနတောကလဲ တမငျတကာ ထမီကို လှနျပွီး ဓါတျပုံအရိုကျခံထားသလိုကွီး။ ဟငျ သူ ပုဆိုးကိုလြော့ခြှတျပွီး မတျတောငျ နတေဲ့သူ့ဟာကွီးကို ကိုငျထားလိုကျတာ။
သူ့စိတျကူးယဉျနမှောပေါ့ ဝိုငျးရဲ့ အောကျစလှတျနတေဲ့ပုံကို ကွညျ့ပွီး စိတျနဲ့ပွဈမှားနမှောပေါ့။ ဘယျလိုလုပျရမလဲ မသိမသာ ပွနျထှကျသှားလို့ရော ရမလား အငျး မသိလိုကျရငျ ကောငျးသား တျောကွာ သူ့ကိုတှပွေီ့း သူ့ဟာကွီး သူကိုငျ ထားတာ မွငျလို့ဝိုငျးက ပွနျလှညျ့ပွေးတယျဆိုရငျ ဘယျတော့မှ ရငျဆိုငျရဲကွမှာမဟုတျဘူး။ ဘာလုပျရ မလဲ သူ့ဟာကွီးကလဲ သနားစရာကောငျးလောကျအောငျ ဆာလောငျနရှောပုံပဲ ခကျထာက ဝိုငျးက ဘယျ ယောကျြားနဲ့မှ အလိုးခံဖူးသေးတာ မဟုတျဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူ့ကိုကွညျ့ပွီး အလိုလိုနရေငျး သနားသလိုခံစားမိရ ပွနျတယျ။ ဟုတျတယျ ခှနျဂြာဆိုတဲ့ဓါတျပုံဆရာလေးကမိနျးကလေးတှေ ဓါတျပုံမရိုကျဘူးလို့ အငျမတနျ နံမညျကွီးနတော အခုဝိုငျးနဲ့ ဓါတျပုံရိုကျဖွဈကွပွီး ခှနျဂြာမှာဒီဝဒေနာကွီးခံစားနရေတယျဆိုတော့ ဝိုငျး စိတျကောငျး နိုငျမလား ဝိုငျး ရပျနရောက မသိမသာ သူ့ဟာကွီးကိုခိုး ကွညျ့မိပွနျတယျ။ခှနျဂြာဟာ မိနျးမရဘူးတယျဆိုတာ ဝိုငျး သိပါတယျ။ ဒါကွီးနဲ့ အလိုးခံခဲ့ရတဲ့ ခှနျဂြာရဲ့မိနျးမလဲ ခှနျဂြာကို ခဈြမှာ။
သိပျခဈြမှာပါပဲ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့လေ ခှနျဂြာဆိုတဲ့ ကခငျြလေးဟာ တကယျ့ကို ကနျြးမာသနျ စှမျးတဲ့ယောကျြားကောငျး တဈယောကျဖွဈနလေို့ပဲပေါ့ ဝိုငျးအသကျ (၁၈)နှဈထဲဝငျနပေါပွီ ဟိုဒငျး လိုးမယျဆိုရငျလညျး ရနပွေီပေါ့။ ခလေးလဲမှေးနိုငျပွီပေါ့။ ဒါပမေဲ့ အခဈြဆိုတာ မသိတသိနဲ့ ရငျခံတတျရုံလေးရှိသေးတာ။ ထကျကြျောဆိုတဲ့ ဟိုအကောငျက လကျသရမျးလှနျးလို့ဝိုငျးမုနျးလိုကျတာ မပွောနဲ့တော့..။ ““ဆရာ ..”” မှားသလား မှနျသလား မဝခှေဲ နိုငျခငျမှာပါးစပျက လှတျခနဲ ချေါလိုကျမိတယျ။ ခကျ လိုကျတာ ““ဟငျ ဝိုငျး ကုလားထိုငျက ကမျးကတမျး ကွီးထရငျး ပုဆိုးကို ပွငျဝတျနတေဲ့ သူ့တဈ ကိုယျလုံးဟာ ဆောကျတညျရာမရပဲ ယိမျးထိုးနရှောတယျ။ မကျြနှာတဈခုလုံးဟာလဲနီလို့။ ဝိုငျး ဘယျအခြိနျကရောကျနေ တာလဲ ဟငျ သူ့အသံကွားမှ သူ့ကိုပိုသနားမိပွနျတယျ။ ခိုးကွောငျခိုးဝှကျ ပွုမူနတေဲ့ သူ့ကို လူမိသှားတော့ သူ မနတေတျတော့ဘူး မကျြနှာကို အောကျငုံ့ပွီး နှုတျဆကျ စကား ပွောနပေမေဲ့ သူဟာ အပွဈရှိတဲ့ ကြောငျးသား လေးလို တုံနရှောတယျ။ ““ဝိုငျး ရောကျနတော ကွာပါပွီ ဆရာ”” ဘာထူး လဲ ဝိုငျးလဲ အသံတှတေုနျနတောပဲဥစ်စာ ပွီးတော့လဲ သူ့လိုပဲ ခေါငျးကို ငုံ့ပွီး ပွောနတော ဝိုငျးနဲ့ သူ့ကွားမှာ ပွောစရာစကားတှေ ကုနျသှားတယျ။
ဘာကစပွီးပွောရမှနျးမသိအောငျလဲ ခံစားကွရတယျ။ ““ဒီပုံကို ကနြျော တမငျရိုကျတာမဟုတျဘူး”” ““ဝိုငျး နားလညျပါတယျဆရာ”” ““ဒါပမေဲ့ ကနြျော အရမျးခံ စားလိုကျရတယျ”” ဝိုငျးက သံယောငျလိုကျပွီး ရရှေတျ နမေိသညျ။ ““ဟုတျတယျ ဝိုငျး အရမျးခံစားရတယျ ဝိုငျးရဲ့အလှ အငျး ဝိုငျးရဲ့အလှပဲဆိုပါတော့ ကနြော့ကို ဖမျးစားနတေယျ ဝိုငျးရယျ ကနြျော မရုနျးနိုငျ မကနျနိုငျ တော့ဘူး”” ဝိုငျးအလှတဲ့ ဝိုငျးရဲ့စောကျဖုတျကို မွငျလို့ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျဖွဈပွီး လိုးခငျြစိတျတှဖွေဈပျေါ နပေါတယျဆိုတာကို ယခု ယဉျယဉျကြေးကြေးပွောတာပဲမဟုတျလား။ ဝိုငျးဘယျလိုလုပျပွီးခေါငျးဖျေါရဲမှာလဲ ဝိုငျး အသားတှေ တဆတျဆတျတုံအောငျ စိတျလှုပျရှားနေ မိတယျ။ စားပှဲစှနျးကို အထပျထပျပှတျရငျး ခေါငျးကိုပဲ တှငျတှငျငုံ့ထားမိတယျ။ ခကျလိုကျတာ ဘာပွနျပွောရမလဲ။ ““ဝိုငျး .. ဝိုငျးရယျ”” ကတုံကရီနဲ့ သူ့လကျနှဈ ဖကျ က ဝိုငျးပုခုံးနှဈဖကျကို တငျးတငျးလေး ဆုတျကိုငျ လိုကျတယျ။ ဝိုငျးလေ ဆတျကနဲ တုံသှားတယျ။ ရုနျးပွဈ လိုကျရမလား ပါးကို ဖွနျးကနဲ မွညျအောငျ ရိုကျပွဈ လိုကျရမှာလား ဝိုငျး တဆတျဆတျတုံသော နှုတျခမျး တှကေို ကိုကျရငျး သူ့မကျြနှာကို မော့ကွညျ့မိသညျ။ သူ့မကျြနှာက ဝိုငျးထံမှ တဈစုံတဈရာ အဖွကေို မြှျော လငျ့တကွီး စောငျ့စားဟနျ အားနညျးသော မကျြလုံး မြားနှငျ့ ကွညျ့နတေသညျ။ ဘာထူးလဲ .. ဘာူထးလို့လဲ။ သူ့နှုတျခမျးတှလေဲ တဆတျဆတျတုံနကွေတာပဲ .. ““ဝိုငျး ခေါငျးကို ပွနျငုံ့ရငျး သူ့လကျနှဈဖကျကို အသာအယာ ဖယျခလြိုကျခါ သကျပွငျးနှဈခကျြ ဆငျ့ကဲ ရှိုကျမိ၏။ “ဝိုငျးရယျ .. ကနြျော ရိုငျးသှားသလားဟငျ”” သူက စိုးရိမျတကွီး တုနျတုနျလှုပျလှုပျမေးသညျ။ ဝိုငျးက ခေါငျးကိုငုံ့မွဲ ငုံ့ကာ စကားမပွနျမိပဲရှိသညျ။ တဆတျဆတျတုနျနသေော ဝိုငျး၏ နှုတျခမျးလေးမြားကို အနီး ကပျ မွငျသညျအထိ သူတိုးကပျလာသညျ။
နှုတျခမျး ဆိုးဆေး ပါးပါးလှပျလှပျ ဆိုးထားသောကွောငျ့ နှုတျခမျးနီရနံ့ခြိုမှေးမှေးလေးကို သူရှူရှိုကျမိသှား၏။ တဆကျတညျးမှာလညျး ဝိုငျးကိုယျနံ့လေးကို သူက ပူးပူးကပျကပျရရှိလိုကျပွနျသညျ။ တဈကိုယျလုံးရှိ သှေးမြား ဆူကွှလှုပျရှားလာကွသညျ။ သူက တံတှေးကိုဂလုကနဲ မွညျအောငျ မွိုခလြိုကျရငျး ဒုတိယအကွိမျဝိုငျး၏ ပုခုံးလေးနှဈဖကျကို ဆုတျကိုငျလိုကျခါ မကျြနှာ ခငျြးနီးကပျအောငျ ဆှဲယူလိုကျသညျ။ နှုတျခမျးနှဈခုသညျ နှေးကနဲ ပူးကပျသှားသညျ။ဝိုငျး၏ မကျြတောငျရှညျကွီးမြား မှေးစငျးကသြှား၏။လကျ အစုံကလဲ သူ့ကြောပွငျကို အလနျ့တကွား ဖကျမိသညျ။ နှုတျခမျးခငျြးထိမိရုံလေးဖွငျ့ ဝိုငျး တဈကိုယျလုံး ဆတျခ နဲ တှနျ့ကာ အကွောအခဉျြတှေ ပြော့ခှခေငျြသှားသညျ။ ““ပွှတျ..ပွှတျ”” သူက ဝိုငျးနှုတျခမျးနှဈလှာကို ညငျညငျသာသာလေး စုပျယူလိုကျသညျ။ ဖငျြးကနဲ ခံစား လိုကျရသညျ။ ““ခဈြတယျ ဝိုငျးရယျ”” အမောတကောကွီးပွောရငျး နှုတျခမျးလေးကို စုပျပွနျ၏။ သညျတဈခါ သူ့လြှာနှေးနှေးဖွငျ့ ဝိုငျး နှုတျခမျးသားလေးမြားကို တလစပျ ယကျသညျ။ စုပျသညျ။ ခြိုမွမှေးသငျးသော နှုတျခမျးဆိုးဆေးလေးမြား ပွောငျ စငျသှားသညျ။ ဝိုငျးက အသကျကိုအောငျ့ထားမိသညျ။ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘာတှဖွေဈနမှေနျးကို ဝိုငျးမသိ။ မရုနျး မဖယျ မတှနျးမကနျနှငျ့ တလှနျ့လှနျ့နေိမိခွငျးကို ဝိုငျး၏ ဆူဖွိုးသနျစှမျးသော လတျဆတျသညျ့ သှေးမြားဆူကွှ လာခွငျး သင်ျကတေပငျဖွဈမညျထငျသညျ။ ““အခနျးထဲ သှားကွရအောငျ ဝိုငျးရယျနျော”” သူက တကယျ့ကို စိတျလှုပျလှုပျရှားရှား အသံကွီးနှငျ့ ပွောကာ ဝိုငျးခါးသေးသေးလေးကို ဖကျ၍ဆှဲချေါသညျ။ အခနျးထဲသှားလိုးကွမညျဟူသော အဓိပ်ပါယျမှနျး သိ၏။ ပူနထေူနသေောစိတျနှငျ့ခေါငျးကို ငုံ့ထားမိ၏။
ဘာဖွဈရတာလဲ ရုနျးပါလား .. ဝေးရာဆီကိုခှာပါလား ဝိုငျး ဟာ သံလိုကျစကျကှငျးမိနတေဲ့သူလိုပဲ သူချေါရာကို တရှရှေ့ပေ့ါသှားနမေိတယျ။ အမှားအမှနျ ဝဖေနျတှေး ချေါနိုငျတဲ့ စိတျတှဘေယျရောကျကုနျပလဲ အို .. သူဝိုငျးကို နှဈယောကျအိပျကုတငျကွီးပျေါ ပှတေ့ငျ၏။ အ လငျးရောငျတသဲ့သဲ့မြှသာလငျးသညျ။ သူ့ခန်ဓာကိုယျကွီး က ဝိုငျးအပျေါသို့ တဖွေးဖွေး အုပျမိုး ခှစီးလာသညျ။ ဝိုငျးမောသညျ။ မကျြစအေ့စုံကို မှိတျထားလိုကျမိ၏။လကျနှဈဖကျက သူ့ရငျဘတျကို အထိတျတလနျ့လေးတှနျးထား၏။ အခနျးထဲမှာ နှဈယောကျသား၏ အသကျရှူသံသညျသာ ပွငျးပွငျးပပြလြေး ထှကျပျေါနသေညျ။ဝိုငျး ဘာကွောငျ့မှနျးမသိ မကျြစအေ့စုံကို ဇှတျမှိတျ ထား မိသညျ။ အသိစိတျမြားကမူ သူ ဘယျနားကိုကိုငျသညျ ဘာလုပျနသေညျကို သိနသေညျ။ သူ့ထံမှ ပူနှေးသော အသကျရှူရှိုကျသော လကေို မကျြနှာပွငျ၌ ထိတှခေံ့ စားရ၏။ ခြိုသငျးသော ယောကျြားရနံ့တဈမြိုးကိုလဲ ဝိုငျးရနေ၏။ ခုံလိုကျတာ .. ရငျတှေ တလှပျလှပျကို မော နသေညျ။
သူ့စကားတှေ ပွောနသေညျဟုတော့ ဝိုငျးထငျ၏။ စကားလုံးမြားက တိုးလှနျး ညငျသာလှနျးပွီး ကွိပျ ၍ပွောသောစကားမြားဖွဈ၍ မသဲမကှဲလသေံမြှ လောကျသာ တီးတိုးပွောနခွေငျးဖွဈ၏။ တဈခြို့ကိုလဲဝိုငျးနားလညျသညျ။ နားလညျသော စကားလုံးတိုငျး ကလညျး ဝိုငျးရဲ့ရငျကို ပူနှေးလှိုကျဖိုစရေုံမြှမက မကျြ နှာ တဈခုလုံးကို ထူပူစသေော စကားလုံးမြားသာ ဖွဈနေ သညျ။ ““ဓါတျပုံထဲမှာ ဝိုငျးစောကျဖုတျကွီးကို မွငျကထဲက လိုးခငျြနတော သိလား . ဝိုငျး”” ဝိုငျး ထိုစကားကွားတော့ ရှကျလိုကျတာ။ မကျြ နှာကို ပွုံးထားရမှာလား မဲ့ထားရမှာလား .. မသိ။ နောကျ သူထပျပွောသေးသညျ ဝိုငျးက မကျြနှာကို တဈ ဖကျသို့စောငျးထားပွီး အံလေးတငျးတငျးကွိပျထားရ၏။ ““ကိုယျတို့လိုးကွရအောငျနျော ဝိုငျး”” ခကျလိုကျ တာကှယျ ဘယျလိုလူလဲမသိဘူး ဟုတျတယျ ဝိုငျးက အဈကို့လီးကွီးကို မွငျကတညျးက ဝိုငျးလဲခံခငျြနပေါ တယျအဈကိုရယျ မွနျမွနျလိုးစမျးပါလို့ ပွောရမှာလားဟငျး အပြိုရှငျ့ အပြို အလိုးခံဘို့မပွောနဲ့ ကိုယျ့ဖငျတောငျ ကိုယျ ငုံ့ကွညျ့ဖူးတာ မဟုတျဖူး ယုံလား။ အဲဒီစကားမြိုးတှေ ဝိုငျးပါးစပျက ဘယျလိုလုပျထှကျမှာလဲလို့ တဈခါထဲ သူက မိနျးမရဘူးပွီးသားဆိုတော့ အဲဒီစကားတှေ ထှကျရဲ ပွောရဲတာပေါ့ အို ကြှတျ နို့နှဈလုံးကို ကိုငျပွီး နယျပေး နတေယျ။
ဟာအား ကြှတျကြှတျ ကောငျးတော့ ကောငျးတယျ ဒါပမေဲ့ ရှကျတာလဲလှနျရောပဲ သူအဲဒီလို လုပျလေ ဝိုငျးက မကျြစတှေ့ကေို တငျးတငျး ပိတျထား မိလပေဲ။ လကျခြောငျးတှကေ ခေါငျးရငျးက ကုတငျတိုငျ ကို စုံကိုငျဆှဲထားမိတယျ။ လကျဆဈလေးတှဆေိုတာ ဖွူ တောငျနတေယျ။ အပျေါအကငြ်္ီရငျဘတျကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျပွနျပွီ ဝိုငျး အသဲတှအေေးကနဲ ခံစားလိုကျရတယျသိလား နှေးနှေးပူပူ သူ့အာခံတှငျးမှာ နို့သီးခေါငျးလေး တှကေို စို့ပေးပွနျတော့ ဘာမှမဆိုငျတဲ့ ဟို ခါးဆီက ဖွငျးကနဲဖွဈပွီး အပျေါကို ကော့ထောငျလိုကျမိတယျ။ စောကျပတျထဲမှာ ရှစိရှစိဖွဈကုနျတယျ။ အဲဒါ ဘာဓါတျလဲမသိဘူးနျော သိပျဆနျးတယျ သိလား ဝိုငျး နို့နှဈလုံးကနမေထိ လမေထိနဲ့ သနျ့သနျ့စငျစငျအုပျထိနျး လာတာဆိုတော့ စိမျးစားဥတှလို ဖှေးနတော အခှံနှာ ထားတဲ့စိမျးစားဥမြိုးပေါ့။ အရှယျအစားက ဟငျးသောကျ ပနျးကနျအလတျစားတဈလုံးကို မှောကျထားသလိုပဲ ခုံးလုံး ပွီး ကဈြမာနတော ..ခှနျဂြာဆိုတာကလညျး သိတဲ့အတိုငျး မိနျးမသပွေီးကတညျးက မလိုးရတာ ကွာပွီဆိုတော့ ဝိုငျးရဲ့ တဈကိုယျလုံးကို ဖွဈနိုငျရငျ ကိုကျစားဝါးမွိုပွဈခငျြလောကျအောငျ ဖွဈနတော။ ထမီအထကျဆငျစလေးကို ဆှဲဖွုတျပွီး ခြှတျပွနျ၏။ ဝိုငျး၏ အတှငျးခံ ဘရာဇီယာလေးက လညျပငျး၌ ရောကျနသေလို ထမီကလညျး အောကျသို့လြောဆငျး သှားသညျ။ စောကျမှလေေးမြား မစုံတဈစုံ ပေါကျနကွေပွီဝိုငျးက အမှေးနဲနဲသနျခငျြသညျ။ တငျပွရနျကနျြရှိပါသေးသညျ……..
အဲဒီလောက်ကြီးမကြမ်းနဲ့ကွာ .. နာတယ်”” ပူကနဲ နားထဲတိုးဝင်လာသော အသံကြောင့် ခြေ အစုံကို ဖျတ်ကနဲ ရပ်လိုက်ရသည်။ ““ဘွတ် စွပ် ဘွတ် ဘွပ် စွပ် စွိ ပြတ်”” ““ဟို့ အိုး အိုး ကျွတ်ကျွတ် အရမ်းကြပ်တာပဲ ကွယ်”” ““နာရော နာသေးလား ဟင်”“ ““အ အ အခုန လောက်တော့ မနာတော့ဘူး”” သုံးထပ်သား ခန်းစည်း လေးအတွင်းမှ တီးတိုးသံလေးများကို သူ့နားက သဲသဲ ကွဲကွဲဠကြားနေရသည်။ ““ကောင်းလိုက်တာ အင်း အင်း အင့် အင့်”” ဒါ ထက်ကျော်အသံ သူမှတ်မိသည်။ ကောင်မ လေးအသံက မပီမသ ဗလုံးဗထွေးနှင့် ညီးတွားသံ တိုးတိုး လေးစုပ်သပ်နေသံလောက်သာ ထွက်ပေါ်နေရာ မသဲကွဲ။ ဝိုင်းချစ်အုံဆိုသော ခလေးမလေးပင်ဖြစ် နေလေသလား။ ခွန်ဂျာ့ရင်သည် အတိုင်းအဆမဲ့စွာ တုံရီလှုပ်ရှားလာ၏။
လက်ထဲမှ ကူးပြီးသား ဓါတ်ပုံအိတ်ကို စားပွဲပေါ် အသာချထားကာ အခန်းတွင်းသို့ တံခါးကို ဟလျက် ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ““မြန်မြန်လုပ် အစ်ကိုရယ် မပြီးသေးဘူးလား”” ““ပြီးတော့မှာပါကွယ် တအောင့်လေးနော် ..နော်””ထက်ကျော်ဖင်ကြီးက လုံးဝပြောင်စင်ကာ လုံချည်မရှိ အောက်မှပက်လက်အနေအထားနှင့်ပေါင်နှစ်ချောင်း ကားထားသော ကောင်မလေး စောက်ပတ်ထဲသို့ ထက် ကျော်လီးကြီးက ပိုင် ရိုက်သွင်းနေသလို စိုက် စိုက်ဆင်း နေသည်။ ““ဝိုင်း”” ရယ်ဟု သူက မျက်ရည်ဝဲစွာ ရေရွတ် သည်။ မနုဿမုဆိုး ထက်ကျော်လက်အတွင်း သက်ဆင်း မိမှတော့ ဝိုင်းဘ၀ ဤသို့သာ ကားလိပ်ချရမည်ကို ခွန်ဂျာ ကြိုတင်သိထားနေသလိုပင်။ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက ကြီးမားသော လီးမဲမဲ ကြီးအဝင်အထွက်၌ ဘေးသို့ ပြန့်ကားလိုက် စုလိုက်ဖြင့် လှုပ်ရှားနေသည်။ ထက်ကျော်ဂွေးစိကြီးကမူ စောက်ဖုတ် အောက်ခြေ ဖင်နှစ်ခြမ်ားကားကို ဖတ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ မှန် မှန်ရိုက်ပေးနေသည်။
မိုးပေါ်သို့ ဖဝါးလှန်ကာ မြောက်ထားသော ကောင်မလေးခြေချောင်းလေးများ ကုတ်ကွေးနေရှာ သည်။ ““ဆောင့် .အင့် အင့် နာနာလေး အစ်ကိုရယ်”” ““ဒါနဲ့ ဆောင့်တာ နာတယ်ဆို”” ““အဟွန်း နာလို့ နာတယ် ပြောတာပေါ့ ခုမှ မနာတာ”” ထက်ကျော်ဖင်ကြီးကို ဆွဲမြောက်လိုက်၏။ လုံးပတ် ငါးလက်မနီးပါး ကြီးမားကာ စောက်ရေများနှင့် ပြောင်လက်နေသောလီးကြီးက စောက်ဖုတ်လေးထဲမှ ကျွတ်လုနီးပါးထွက်လာသည်။ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေး အောက်ခြေ၌ ဖြူလွလွ မြုပ်ပူစီဗောင်းလေးများ အစီအရီ စုပြုံတွဲခိုနေကြသည်။ တင်းတင်းလေး စေ့သွားသော အကွဲကြောင်းကြား၌ လီးဒစ်ကြီးကား အပြင်သို့ ငါးမျှာချိပ် တစ်ချောင်း လို ဆွဲထွက်လာသည် စောက်ပတ်အတွင်းသား ရဲရဲ လေးများ လန်ထွက်လာ၏။ ““ရှူး အား ကျွတ်ကျွတ် အစ်ကိုရယ် အစ်ကို့ ဟာကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တာ ရင်ထဲကို ဟာတာတာကြီး ဖြစ်ပြီး ကျန်ရစ်တာပဲ တစ်မျိုးကြီးနော် .. အင်းဟင်း ဒါဖြင့် အမြဲတတ်ထားပေးမယ်လေ ဟင် သွား ဒီက အ ကောင်းပြောတာ ဆောင့်မယ်နော် စောက်ပတ်ကို လက် နဲ့ဖြဲထား မောမော ဟိုက်ဟိုက်အသံနှင့် ထက်ကျော် အ မိန့်ပေးသလိုပင် ကနုကမာ ရောင်တောက်နေသော လက်သည်းရှေည်လေးမျာပါသည့် လက်ချောင်းဖွေးဖွေး လေးနှစ်ဖက်က စောက်ပတ်ကို ဆွဲဖြဲပေး၏။
အစိလေးကပြူးပြီး ထောင်နေသည်။ ထိုစောက် စိအောက်ခြေအတွင်းပိုင်း အသားနုလေးများ လှုပ်လှုပ်ရွရွ ပေါ်ထွက်လာသည်။ စောက်ပတ်အတွင်းမှ ကြ ထွက်နေသော စောက်ခေါင်းဝ အသားစိုင်များက အမဲ သားနှယ် ရဲရဲနီကာ လီးထိပ်ကြီး မဝင်မီ ခေတ္တမျှ ပိတ်ဆို့ နေကြ၏။ ““ဘွတ်””ခနဲ အသံနှင့်အတူ ထက်ကျော်၏ လီးထိပ်ကြီးက စောက်ခေါင်းထဲသို့ စိုက်နစ် တိုးဝင် သွားသည်။ ““အီး ဟီး ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်”” ကောင်မလေး ညီးတွားပုံက မချိမဆ့်နိုင်လွန်းလေရာ ကြားရသူ ခွန်ဂျာရင်၌ပင် နင့်တင့်တင့်ကြီးဖြစ်သွားစေလေသည်။ ထက် ကျော်၏ ရာဇဝင်လူဆိုး စာရင်းဝင် ပစ္စည်းကြီးက အသစ် စက်စက် စောက်ပတ်လေးအတွင်းသို့ ပယ်ပယ်နယ် နယ်ကြီး လိုးဝင်နေသည်မှာ ရှည်ကြာလွန်းလှသည်ဟု သူထင်လေသည်။ ဝင်သည် ဝင်နေသည် ဝင်နေဆဲ ကာလမှာပင် ထက်ကျော်ဖင်ကြီးက တဖြေးဖြေး နိမ့်ဆင်းနေသည်။ ““အင်း .. ဟူသော ကောင်မလေး၏ ညီးတွား သံလေးက ထက်ကျော်လီးကြီး အဆုံးရောက်မှ အင့်အင်း ဟု အဆုံးသတ်လိုက်သည်ကိုလည်း တွေ့ရကြားရ၏။ ထက်ကျော်က လူယုတ် .. စောက်ပတ်နှင့် ဖင်အကွဲကြောင်းစပ်ကြား အသားနုနေရာလေးကို လက်ညှိုးဖြင့် ရစ်ဝိုက်ပါတ်သပ်ပေးသည်။
လီးကြီးအဆုံးဝင် ထာသဖြင့် တနင့်တပိုးခံစားထားရသော ကောင်မလေး ခမျာ ဖင်ကြားကို လက်ညှိုးနှင့် အမွှေခံရသောခါ ကတုံ ကရီလေးဖြစ်လာသည်။ စောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းက ထက် ကျော်၏လီးတန်ကြီးကို ခါးသိမ်သွားမတတ် ယောင်၍ ယောင်၍ ညှစ်ပြစ်လိုက်ရှာသည်။ အခန်းဝမှချောင်းနေ သော ခွန်ဂျာဘက်သို့ ဖင်နှစ်ခုက လှည့်ထားလေရာ ထိုသို့ ကောင်မလေး စောက်ပတ်ကို ညှစ်လိုက်ခြင်းကို ခွန်ဂျာ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့လိုက်ရသည်။ထိုအခါ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင်ခွန်ဂျာ့လီးအရင်းက ““တင်း””ကနဲ ယောပြီးခံစားလိုက်မိပြန်သည်။ ““ကွာ အဲလို မလုပ်နဲ့ ဟင့် ဟင့် မလုပ်ပါနဲ့ဆို”” ““ခံလို့မကောင်းလို့လား ဟင်”” “ ယားတယ် ဖင်ထဲက တစ်မျိုးကြီးပဲ”” ““ဒါဖြင့် ဖင်ကိုလိုးပေးမယ်လေ”” ““ဟေ့ အေးကွာ အဲဒါတော့ မလုပ်နဲ့”” ““ခံကြည့်ပါအုံး မကောင်း တော့မလုပ်ဘူးပေါ့ ဘယ့်နှယ်လဲ”” ““ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မဟုတ်တာသိပ်လုပ်ချင်တာပဲ”” ““စောက်ပတ်ကအမြဲ လိုး နေရတာ ရိုးနေပြီ နော်လို့”” ““ကျွတ် အကိုကလဲ ရှေ့ဖင် ပဲလုပ်ပါကွာ”” ထက်ကျော်ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ ကောင်မလေးဖင်ကြားကိုမွှေနေသော လက်ချောင်းက လီးတန် နှင့်အတူ စောက်ပတ်ထဲသို့ ညင်ညင်သာသာ ယှဉ်တွဲ ထိုးသွင်းလိုက်သည်။ ကြည့်ပါလား လက်ကောလီးရော နှစ်ခုသွင်း ပြန်ပြီ အစ်ကိုကြံကြံဖန်ဖန် သိပ်လုပ်တာပဲ နာတယ် သိလား။ ထက်ကျော်လီးဘေးမှ လက်ညှိုးကို ပြန်နှုတ် လိုက်ပြန်သည်။
ဖင်ကြီးကို မြောက်ခါ မြောက်ခါ ခတ် သွက်သွက်လေး ဆောင့်လိုက်၏။ ““ဘွတ်စွတ် ဘွတ်စွတ် ကွိ ပိ ဘွတ်စွပ်”” “အင့်““အင့် အင့် အင့်”” ““အစ်ကို့လီးကို အားရရဲ့လားဟင် ချိုမာ”” ““အိုး ဘာတွေမေးမှန်းမသိဘူး သွားကွယ်”” ချိုမာတဲ့ ဝိုင်းမဟုတ် တော်ပါသေးရဲ့ ခွန်ဂျာ ရှေ့သို့ခြေတစ်လှမ်းတိုးဖြစ်သည်။ သောက ကင်နိုင် သော စိတ်နှင့်လည်း လီးကဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲတောင် ပေပေပြီ။ ““ချိုမာ အားမရမှာစိုးလို့ပါ”” ““အမလေး လေး အစ်ကိုရယ် ဒီလောက်ဟာကြီးနဲ့ ချိုမာ့ဟာလေးထဲ လုပ်နေတာတောင် သေလုနီးပါးခံနေရတာ ဒီထက်ကြီးရင်တော့ စုတ်ပြတ်ကုန်မှာ ဟင်း ဟင်း ဟင်း ”” နှစ် ယောက်သားငြိမ်သွားသည်။ ထက်ကျော်ဖင်ကြီးက အကြောဆွဲသလို ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တုံခနေတုန်းဖြစ်သည်။ချိုမာဆိုသော ကောင်မလေးက ထက်ကျော် ဖင်ကြီးကို ဆွဲကာ ဆွဲကာ ဆောင့်ရင်း တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနှင့် တွန့်လိမ် နေရှာသည်။ ထက်ကျော်လီးကြီးက ချိုမာ့၏စောက် ပတ်လေးအတွင်း၌ အရင်းအထိ စိုက်ဝင်ကာ တွင်း အောင်းရင်းအတွင်း၌ တုံခါနေမည်ကို ခွန်ဂျာ တွေးမိ လေသည်။
ထက်ကျော်ပုခုံးကိုမေးတင်ကာ မှိန်းနေ သော ကောင်မလေး မျက်နှာကိုအခုမှ သူတွေ့ရသည်။ ငယ်ရွယ်နုနယ်လွန်းသော ချာတိတ်မလေး မျက်နှာက ကော်ပတ်ရုပ်ကလေးနှယ် သန့်စင်လှပသည်။ နက်မှောင်သောဆံပင်လေးများက ပန်းနုရောင် ခေါင်း အုံးကြီးပေါ်၌ ပျံဝဲ ဖွာဆင်းနေသည်။ မှေးစင်းထား သော မျက်လုံးအစုံသည် တလှုပ်လှုပ် ..။ ““နောက်တစ်ချီ လုပ်အုံးမလား”” ““ကျောင်းလွှတ် ပြီးပြီ ကို ရဲ့ ကျောင်းပြန်နောက်ကျရင် အမေဆူမှာ နောက်မှနော် နော်လို့” ” ချိုမာသဘောပါ”” ငနဲသားအသံ က မကျေနပ်သလိုလို ဝမ်းနည်းသလိုလို “ “လုပ်ပြီ ကိုကလဲဒီလောက်လုပ်ရတာကို အားမရနိုင်ဘူး သူ့မှာ” ” ချိုမာ့ဖက်ကလဲ ပြန်ကြည့်အုံး”” ထက်ကျော်က နှာခေါင်း မှ ဟင်းကနဲသက်ပြင်းမှုတ်ထုတ်ရင်း ချိုမာ့ဗိုက်ပေါ်မှ ခွာ၍ထသည်။ချိုမာရော ထက်ကျော်ပါ စောက်ပတ်နှင့်လီးတို့ပြိုင်တူငုံ့ကြည့်မိကြသည်။ သုတ်ရေများ စေးကပ်ပြစ်ချွဲနေသော စောက် ပတ်အတွင်းမှ ထက်ကျော်လီးကြီးကို ဖြေးဖြေးခြင်းဆွဲ ထုတ်လိုက်သည်။ ““နဲနဲပျော့သွားပြီ ..နော်”” ချိုမာက လီးတန်ကြီးကို လက်ချောင်းအဖျား လေးများနှင့် ကိုင်ရင်းထက်ကျော်ကိုမော့ကြည့်ရင်း ပြော လိုက်လေသည်။ ““နောက်တစ်ချီလောက်လိုးရင် ရသေးတယ်”” ““တော်ပါတော့”” ချိုမာက မျက်စောင်းလေးထိုးကာ ပြုံးရင်း ရှက်စနိုးလေးပြောသည်။ ထက်ကျော်ရင်ဘတ်ကြီး ကို ပြတ်ခနဲ နှုတ်ခမ်းနှင့်စုပ်ပြီးမှ ကုတင်ခြေရင်းတွင် အေးစက်စွာ ပုံထားသော ထမီစိမ်းလေးကို လှမ်းယူ လိုက်ခါ ခြေထောက်မှစွပ်သည်။
ထက်ကျော်က အရှိန် မသေသေးပဲ ချိုမာ့မျက်နှာနုနုလေးကို လက်နှစ်ဖက်နှင့် ဆွဲယူကာ နီစွေးရွှမ်းစိုသော နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ချိုမြိန် စွာ စုပ်ယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကုတင်ပေါ်မှာပင် မတ်တတ်ရပ်လိုက်လေရာ ခပ်ငိုက်ငိုက်ကြီး တွဲကျနေသော လီးကြီးက ချိုမာပါးစပ်လေးနားတွင်ရောက်သွားလေ၏။ ““ဟင်း သွား”” ချိုမာက ကဗျာကယာ မျက်နှာ ကို လွှဲဖယ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ထက် ကျော် ပုဆိုးကိုလဲပြစ်ပေးလိုက်သည်။ ““ဒါပဲနော် ကို ချိုမာ ကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးပေးပြီးပြီ ချိုမာ့ကို သစ္စာဖေါက်ရင်တော့ မလွယ်ဘူး”” အာဂ ချာတိတ်လေးပဲဟု ခွန်ဂျာတွေရင်း အ ခန်းဝမှခွာသည်။ စားပွဲရှိ ဓါတ်ပုံအိတ်ပေါ်၌ ကမ်းက တမ်း ခွန်ဂျာဟု လက်မှတ်ထိုးကာ အိမ်ပေါ်မှ အလျင် အမြန်ဆင်းလိုက်သည်။ဝိုင်း မဟုတ်ခြင်းအတွက် သူပျော်သွားမိခြင်းကို ပြန်လည် စမ်းစစ်ကြည့်သည်။ ချိုမာဆိုသော ကောင်မ လေးနှင့် ထက်ကျော်တို့ ဇာတ်လမ်းကိုဝိုင်းသိလျင် .. စင်စစ်ကတော့ ဝိုင်း မသိသော ထက်ကျော်၏ ပုံပြင်မြောက်များစွာရှိနေသေးသည်ကိုမူ ခွန်ဂျာ သိနေ ခဲ့သည်။ အင်းလေ ဒါကြောင့်ပဲ ဝိုင်းအုံချစ် ဆိုတဲ့ ကောင် မလေးအတွက် စိုးရိမ်မိတ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ နော။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ရေမြန်မြန်ချိုးပြီး သံပုရာရည် ချဉ်ချဉ်တစ်ခွက်ကိုသောက်ပြစ်လိုက်ရသည်။ အလုပ်စားပွဲအတွင်းမှ ဝိုင်း ၏ အောက်စလွတ်နေသော ဓါတ်ပုံလေးကို ထုတ်ကြည့်လိုက်မိသည်။
မ ကြာမီလေးတင်ကမှ တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ရသော ချိုမာဆိုသော အထက ကျောင်းသူလေး တစ်ဦးနှင့် မနုဿမုဆိုး ထက် ကျော်တို့၏ နေ့ပွဲကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင်ကြည့်မြင်ခဲ့ရ သော ခွန်ဂျာအဘို့ အောက်စလွတ်ကာ စောက်ဖုတ်အ ကွဲကြောင်းလေး ထင်းနေအောင် မြင်နေရသော ဝိုင်း ဓါတ်ပုံလေးကို ကြည့်ရုံမျှနှင့်ပင် ခွန်ဂျာ လိုးချင်စိတ်များ တဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်လာသည်။ အလုပ်စားပွဲ၌ထိုင်ရင်း လီးကြီးကို တင်းတင်း ဆုတ်ထားမိ၏။ ဒိတ်ကနဲ ဒိတ်ကနဲ လက်ဖဝါးကို သွေး တိုးနေသည့် အထိ အတွေ့ကိုခံစားနေရသည်။ လီးထိပ် မှ ချွဲပြစ်သော အရေကြည်များ ယိုစီးလာ၏။ ထက်ကျော် ကဲ့သို့ သူများသားပျိုသမီးပျိုလေးများကို ဖျက်ဆီးလို သောဆန္ဒလဲမရှိ။ ယောက်ျားပီပီ ကိုင်ချင်သည်ကတော့ အမှန်။ ထို့ကြောင့် ပုဆိုးကို အသာလျော့ချလိုက်သည် မတ်ထောင်နေသောလီးကြီး တစ်ချိန်က ရွယ်ရွယ်ဆို သော ကောင်မလေးကို အကြိမ်ပေါင်းများ စွာလိုးခဲ့သော လီးကြီး .. ယခုမူ စောက်ပတ်နှင့်ဝေးကွာ နေခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီး လီးဖြစ်ပါလျက် လီးအစာ မစားရသော ခွန်ဂျာ့လီးကြီး ဘာကြောင့် ဝြဖိုးနေသနည်း.. မသန်မစွမ်းချိနဲ့စွာ လူမမာတစ် ယောက်နှယ် ပျော့တိ ပျော့ခွေဘာလို့ မဖြစ်ရသနည်း။ စိတ်က ပူထူနေသည် ယခုကဲ့သို့ ကာမဆန္ဒဖြစ်ပွားပေါက်ကွဲမှုမျိုး မကြာခဏခံစားရသော်လည်း ယခု ဝိုင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကို ဓါတ်ပုံထဲ၌ ထင်ထင်ရှားရှား ပြတ်ပြတ်သားသားတွေ့ရမှ ပို၍ ခံစားရသည်။ ထိုစောက် ဖုတ်ကြီးကိုပဲ လိုးချင်နေမိသည်။ လက်တွင်း၌ ဆုတ်ကိုင် ထားသော လီးကြီးက လက်ဆုတ်အာနေအောင် တုတ် ခိုင်ထွားကြိုင်းနေသည်။ ရွယ်ရွယ်နှင့် အိမ်ထောင်ကျစဉ်က သူ့လီးဤမျှလောက်မကြီးသေးဟု သူထင်သည်။
ထိုစဉ်ကသာယခုလောက်ကြီးသော လီးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျင် မည်မျှ ကောင်းမည်နည်း။ ““မောင့်လီးက လီးသူခိုး သိလား ဟင်းဟင်း”” ရွယ်ရွယ်နှင့်လက်ထပ်ပြီး ၈-မိုင်မွေးမြူရေး ခြံ၌ပင် လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး နေ့ည အခိန်မရွေး ကစ်ကြသည်။ ရွယ်ကလည်း မောင့်သဘော မောင်ပိုင် ဆိုင်သော စောက်ဖုတ် .. မီးခြစ်တစ်လုံးနှယ် အိတ်ထဲ ဆောင်ထားရသလို အလွယ်တကူပင် ထုတ်ယူသုံးစွဲ နိုင်ခဲ့သည်။ ဆိုပါတော့ ရွယ်ရွယ် ရေချိုးပြီး ထမီရင်လျား နှင့် သနပ်ခါးလိမ်းနေလျင် သန့်စင်လတ်ဆတ်သော ရွယ့်နို့လေးနှစ်လုံးကို အနောက်မှ သိမ်းဖက် ဆုတ်နယ်ချေ မွမိတတ်သည်။ ထမီကို ရင်လျားမှ ချွတ်လျောချလိုက် သောအခါ ရေဆေးငါးကြီးနှယ် သန့်သန့် ရှင်းရှင်း ရေချိုး ပြီးစနို့ကြီးနှစ်လုံးကို အေးသော အထိအတွေ့နှင့်စို့နမ်း ပြစ်မိတတ်သည်။ ထိုအခါမျိုး၌ ရွယ့်လက်ကလေး တစ်ဖက်က မောင့်ပေါင်ကြားမှ လီးကြီးကို ညင်ညင်သာသာလေး ဆုတ်ကိုင်ပေးတတ်လာ၏။ ရွယ်ရွယ် သနပ်ခါး မလိမ်း ဖြစ်တော့ ကျောက်ပြင် ဘေးမှာပင် ရွယ်ရွယ်လှဲအိပ်ခါ ထမီကို ခြေထောက်မှဆွဲချွတ်ခြင်းခံရရှာသည်။ ဝတ်လစ် စလစ်နှင့် ဖင်အခင်းမရှိ ခေါင်းအုံးမပါ မောင့်လိုးခြင်းကို ခံရရှာပြန်၏။ စောက်မွှေးလေးများ ရေစိုနေ၍ ညီညီ ညာညာကပ်နေလျင်လည်းမောင်က တယုတယ လျှာ လေးဖြင့် ယက်ပေးတတ်သည်။ဒါကိုပင် ရွယ်ရွယ်က မောင့်ကို သိပ်ချစ်ရသည်။ ရွယ်အပေါ်၌ မောင်က မရွံ မရှာ ချစ်ပါလေကလားဟု အားနာ မြတ်နိုးမှုနှင့် မောင် လိုးလျင် အချိန်မရွေး အလိုးခံနေခြင်းဖြစ်၏။
ထိုစဉ်က ယခုကဲ့သို့ စောက်ဖုတ်ယက်ခြင်း လီးစုပ်ခြင်းများ ခေတ် မစား အေအိုင်ဒီအက်(စ်)ရောဂါမသိသည့်တိုင်အောင်ရွံရှာဖွယ် ကာမဆက်ဆံနည်းကို မြန်မာများ ပီပီ အသုံးမပြုခဲ့။ အကယ်၍ မောင်ကသာ အတင်းအကြပ် စုပ် ခိုင်းမည်ဆိုလျင် ရွယ်ရွယ် မစုပ်ပဲနေမည်မထင် ရွယ် သည် မောင့်ကို အသဲကွဲမတ်ချစ်ခဲ့ရှာသော မိန်းကလေးပင် မဟုတ်လား။ တစ်ည ကို မှတ်မိသည်။ အလုပ်များသဖြင့် ည ပိုင်းမလိုးဖြစ်ကြပဲ အိပ်ပျော်ခဲ့ကြ၏။ မောင်အိပ်ပျော် အိပ်မောကျနေစဉ် မောင့်လီးကို လက်ဖဝါးနုနုလေးနှင့် ဆုတ်ကိုင်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။ မောင်လန့်နိုးသည်။ မောင် နိုးလာမှန်း ရွယ်သိသည်။ ကြိုတင်၍ အဝတ်အစားများ ချွတ်ထားသော ရွယ်က မောင့်လီး သေးသေးလေးကို အမဲအူ ဆွဲသလို အရေခွံလေးချည်းစုပ်ခါ ဆွဲတင်လိုက် ပြန်ချလိုက်လုပ်နေ၏။ ရွယ်ရွယ်ပါးစပ်နှင့် စုပ်နေမှန်း သိ လိုက်သောအခါ မောင့်လီးကြီးက မျက်လှည့်ပြလိုက်သ လို ချက်ခြင်း တောင်သွားသည်။ ““မောင့်လီးက လီးသူခိုးသိလား”” ဟုလီးထိပ်ပြဲ ပြဲကြီးကို လက်ညှိုးလေးနှင့် တို့ထိကာ ရှက်စနိုးလေးပြုံး ကာပြောရင်း မောင့်ပေါင်ပေါ်သို့ တက်ခွသည်။ မောင် က ခါးကို နေရာကျအောင် ပြင်ရွေ့ပြီး မွေ့ယာပြင်ကို တတောင်နှင့်ထောက်ခါ တစ်ဆစ်ချိုး ငုံ့ကြည့်သည်။ ““ဟင့် မကြည့်နဲ့ ရှက်တယ်”” ရွယ်ရွယ်က မောင့်ရင်ဘတ်ကြီးကို လက်ဖဝါးလေးနှင့် တွန်းလှဲပြီး ပြန်အိပ် စေသည်။ မောင်က ရွယ် အမူအယာအတိုင်း စောင်စ ကို ဆွဲယူပြီး မျက်နှာကို အုပ်ထားလိုက်၏။ ““ကြည့်ပါလား တတ်တယ် သူဒါမျိုး”” မောင့်ရင် ဘတ်ကိုလက်သီးလေးနှင့် ထုရင်း နှုတ်ခမ်းလေးစူပြီး ပြောသည်။
င်က ရွယ်ကိုစတင်လိုးခဲ့ကြစဉ်က ရွယ်ရွယ်က ဤသို့ပင် မျက်နှာကို စောင်ဖြင့် အုပ်ထားခဲ့ သည်။ ထိုသို့စောင်အုပ်ခါ ရွယ်ရွယ်လုပ်သမျှ ငြိမ်ပြီးခံစားရ သော အရသာမှာလည်း ကိုယ်က ဦးဆောင်လိုးရသော အရ သာနှင့်တော့ အတော်ကြီးကွာခြားပြန်သည်။ မျက်စေ့ကို မှိတ်ခါအထိအတွေ့ကို ရင်တစ်ခုံခုံခံစားရသော ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ညင်သာသော အထိအတွေ့ မျိုးကရှားပါးလိမ့်မည်ထင်သည်။ ရွယ်ရွယ်က ယင်းသို့ နွေးထွေးစွာ ရင်ခုံစေ တတ်သော အပြုအမူလေးများကို ပြုတတ်သည်။ လီး ထိပ်ကို ချွဲစေးသော အရေလေးများနှင့် ရောနှောကာ ပွတ်သပ်လျက် နှိုးဆွပေးတတ်သလို ဂွေးစိကိုလဲ မနာ မကျင်လေးဆုတ်နယ်လျက် လီးတန်ကြီးကို ဂွင်းတိုက် ပေးတတ်သေးသည်။ ဤမျှ အပြုအစုကောင်းသော ရွယ်ရွယ့်အား ချွန်ဂျာဘယ်သို့မေ့၍ရနိုင်ပါမည်နည်း။ လီးထိပ်ကြီးကို စ ကောဝိုင်း လှုပ်ရှားရင်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို နှုတ်ခမ်းနီဆိုးသကဲ့သို့ ပြုမူလေတိုင်း ခွန်ဂျာပါးစပ်ကြီး အဟောင်းသားနှင့် အလွန်အမင်း အရသာထူးစွာ ခံစား ဖူးခဲ့ရသည်။ ချစ်စွာသော ရွယ်ရွယ်လေး၏ စိတ်လက်ပါ စွာဖြင့် ကိုင်တွယ်လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၌ ခွန်ဂျာမေ့မေ့မူးမူး မျောပါခဲ့ရသည်။ လီးအပေါ်သို့ စောက်ပတ်အဝကို တေ့ပြီး ညင် သာစွာထိုင်ချလိုက်သောအခါ နွေးအီသော လီးထိပ်မှ အရသာသည် နှလုံးသားမှဆင့်ကူးစိမ့်ဝင်၍ တစ်ကိုယ် လုံးကို ပျံ့နှံ့ခံစားသွားစေခဲ့သော အထိအတွေ့လေးများ ယခုမူ ဝေးခဲ့ရပြီ .. စာရေးစားပွဲ၌ အတန်ကြာ ထိုင်ရင်း မာတောင်နေသော လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားသော ခွန်ဂျာ့လက်သည် တင်းကျစ်နေ၏။ လက်ဖဝါးအတွင်း ၌ အကြောကြီးများထောင်ကာ ဖုထစ်ရုးကြနေသော သူ့လီးကြီးကို ဘယ်သို့ ဖြေသိမ့်ရမည်မသိအောင် ခံစား နေရသည်။ စားပွဲပေါ်၌ သူ့အား ပြုံးရွှင်ရွှန်းစိုစွာ ကြည့် နေသော ဝိုင်းအုံချစ် ဓါတ်ပုံလေးကို စိုက်ကြည့်လိုက် သည်။ ထမီအောက်စလေးလွတ်နေသော ဝိုင်းအုံချစ်ထိုငနေပုံလေးက ဖိတ်ခေါ်နေသလိုရှိသည်။ မျက်နှာ လေးက ပကတိရိုးသားသန့်စင်နေခြင်းအတွက် ဓါတ်ပုံရိုက်စဉ် မိမိစောက်ပတ်ကြီးကို အထင်အရှားပေါ်လွင် နေသည်ကို မသိသည်မှာ သေချာသည်။ ခွန်ဂျာက လည်း နက်ကတစ်များရစဉ်ကတည်းက ထိုပုံလေးကို မျက်စေ့ထဲ၌ စွဲထင်နေရာ အပီအပြင် ကူးပြီးသောအခါရင်၌ အတိုင်းအဆမရှိ ဆန္ဒမီးက အဟုန်ပြင်းစွာ တောက် လောင်ခဲ့ရလေသည်။
လိုးချင်စိတ်များ ထကြွလာလေလေ ချစ်ခဲ့ရသော ရွယ်ရွယ်ကို သတိရလေလေ ဖြစ်လာရ သည်။ ရွယ်ရွယ်သာရှိလျင် သူမအခြေအနေမျိုး၌ ထမင်းပင်ချက်ကြမည်မထင်။ တစ်ယောက်တည်း ငိုင်တွေကာ ပုဆိုးကို ဆီးစပ်အထိလျောကာ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးကြီးကို ကိုင်ထားလေသော ခွန်ဂျာသည် စတူဒီယို အခန်းဆီသို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ညင်သာစွာဝင်လာ သည်ကို သတိမထားလိုက်မိချေ။ အခန်းတစ်ခုလုံး တိတ် ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်။ တစ်ဖက်ဖွင့်ထားသော ပြူ တင်းပေါက်မှ အေးမြသော လေစိမ်းလေးက ညင်ညင် သာသာ တိုက်ခတ်နေ၏။ တစ်ယောက်တည်း ငြိမ် သက်နေသော ခွန်ဂျာနှုတ်ခမ်းအစုံသည် တဆတ်ဆတ်တုံရီနေသည်။ လက်တွင်း၌ ဆုတ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သော သူ့လီးကြီးမှာ ထိပ်ကြီး တင်းကာ ခရမ်းသီး ကြီးတစ်လုံးနယ် ပြောင်တင်းနီရဲနေသည်။ ဆာလောင် ငတ်မွတ်နေသော သူ့လီးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားရင်း ခွန်ဂျာ ဝန်းကျင်ကိုမေ့နေသည်။ အပြင်ခန်းကတည်းက ဝိုင်း အသံပြုကြည့်သည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းတံခါးကြီး ပွင့်နေသည့် အတွက် စတူဒီယိုအဖြစ်အသုံးပြုသော နောက်ဖက် အခန်းသို့ ဆက်ဝင်ခဲ့မိသည်။ ဒါသည်ပင် ဝိုင်းအမှား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမည်။
စာရေးစားပွဲ၌ ငြိမ်သက်ကာ ဓါတ် ပုံတစ်ပုံကို စိုက်ကြည့်နေသော ခွန်ဂျာ့ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ တစ်ကြိမ်တည်းသော တွေ့ဆုံသေးသော ခွန်ဂျာ ကို ဘယ်သို့နှုတ်ဆက်ရမှန်းမသိ။ သို့သော် ခြေလှမ်းတို့ က ခွန်ဂျာ့အနီးသို့ တရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားနေမိသည်။ ထို အခါ ခွန်ဂျာ့စိုက်ကြည့်နေသော ဓါတ်ပုံကို ဝိုင်း အ သေအချာတွေ့လိုက်ရသည်။ တွေ့လိုက်မိသည်နှင့် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ ပုံမှန်စီး ဆင်းနေသောသွေးကြောများ ရပ်ဆိုင်းသွားသလို ခံစား လိုက်ရသည်။ ဝိုင်း၏ ခြေလှမ်းများတုံ့ဆိုင်းသွားကုန် သည်။ ရှေ့တိုးရခက် နောက်ဆုတ်ရခက်တွေဖြစ် ကုန်သည်။ နှလုံးသွေးများ တဒိုင်းဒိုင်းခုံအောင်လည်းခံစားရသည်။ ရင်၌ မောလှိုက်တုံရီသော ဝေဒနာကိုလည်း ခံစားရသည်။ ဓါတ်ပုံက ဝိုင်းရဲ့ပုံလေ ကြည့်ပါအုံး ထိုင်ထား လိုက်တာ အောက်က ဟောင်းလောင်း.. ဘယ် လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲလို့ အိုး ထမီကြားက ထင် ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်နေတာကလဲ တမင်တကာ ထမီကို လှန်ပြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံထားသလိုကြီး။ ဟင် သူ ပုဆိုးကိုလျော့ချွတ်ပြီး မတ်တောင် နေတဲ့သူ့ဟာကြီးကို ကိုင်ထားလိုက်တာ။
သူ့စိတ်ကူးယဉ်နေမှာပေါ့ ဝိုင်းရဲ့ အောက်စလွတ်နေတဲ့ပုံကို ကြည့်ပြီး စိတ်နဲ့ပြစ်မှားနေမှာပေါ့။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိမသာ ပြန်ထွက်သွားလို့ရော ရမလား အင်း မသိလိုက်ရင် ကောင်းသား တော်ကြာ သူ့ကိုတွေ့ပြီး သူ့ဟာကြီး သူကိုင် ထားတာ မြင်လို့ဝိုင်းက ပြန်လှည့်ပြေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ ရင်ဆိုင်ရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်ရ မလဲ သူ့ဟာကြီးကလဲ သနားစရာကောင်းလောက်အောင် ဆာလောင်နေရှာပုံပဲ ခက်ထာက ဝိုင်းက ဘယ် ယောက်ျားနဲ့မှ အလိုးခံဖူးသေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး အလိုလိုနေရင်း သနားသလိုခံစားမိရ ပြန်တယ်။ ဟုတ်တယ် ခွန်ဂျာဆိုတဲ့ဓါတ်ပုံဆရာလေးကမိန်းကလေးတွေ ဓါတ်ပုံမရိုက်ဘူးလို့ အင်မတန် နံမည်ကြီးနေတာ အခုဝိုင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ကြပြီး ခွန်ဂျာမှာဒီဝေဒနာကြီးခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ ဝိုင်း စိတ်ကောင်း နိုင်မလား ဝိုင်း ရပ်နေရာက မသိမသာ သူ့ဟာကြီးကိုခိုး ကြည့်မိပြန်တယ်။ခွန်ဂျာဟာ မိန်းမရဘူးတယ်ဆိုတာ ဝိုင်း သိပါတယ်။ ဒါကြီးနဲ့ အလိုးခံခဲ့ရတဲ့ ခွန်ဂျာရဲ့မိန်းမလဲ ခွန်ဂျာကို ချစ်မှာ။
သိပ်ချစ်မှာပါပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေ ခွန်ဂျာဆိုတဲ့ ကချင်လေးဟာ တကယ့်ကို ကျန်းမာသန် စွမ်းတဲ့ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပဲပေါ့ ဝိုင်းအသက် (၁၈)နှစ်ထဲဝင်နေပါပြီ ဟိုဒင်း လိုးမယ်ဆိုရင်လည်း ရနေပြီပေါ့။ ခလေးလဲမွေးနိုင်ပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာ မသိတသိနဲ့ ရင်ခံတတ်ရုံလေးရှိသေးတာ။ ထက်ကျော်ဆိုတဲ့ ဟိုအကောင်က လက်သရမ်းလွန်းလို့ဝိုင်းမုန်းလိုက်တာ မပြောနဲ့တော့..။ ““ဆရာ ..”” မှားသလား မှန်သလား မဝေခွဲ နိုင်ခင်မှာပါးစပ်က လွှတ်ခနဲ ခေါ်လိုက်မိတယ်။ ခက် လိုက်တာ ““ဟင် ဝိုင်း ကုလားထိုင်က ကမ်းကတမ်း ကြီးထရင်း ပုဆိုးကို ပြင်ဝတ်နေတဲ့ သူ့တစ် ကိုယ်လုံးဟာ ဆောက်တည်ရာမရပဲ ယိမ်းထိုးနေရှာတယ်။ မျက်နှာတစ်ခုလုံးဟာလဲနီလို့။ ဝိုင်း ဘယ်အချိန်ကရောက်နေ တာလဲ ဟင် သူ့အသံကြားမှ သူ့ကိုပိုသနားမိပြန်တယ်။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပြုမူနေတဲ့ သူ့ကို လူမိသွားတော့ သူ မနေတတ်တော့ဘူး မျက်နှာကို အောက်ငုံ့ပြီး နှုတ်ဆက် စကား ပြောနေပေမဲ့ သူဟာ အပြစ်ရှိတဲ့ ကျောင်းသား လေးလို တုံနေရှာတယ်။ ““ဝိုင်း ရောက်နေတာ ကြာပါပြီ ဆရာ”” ဘာထူး လဲ ဝိုင်းလဲ အသံတွေတုန်နေတာပဲဥစ္စာ ပြီးတော့လဲ သူ့လိုပဲ ခေါင်းကို ငုံ့ပြီး ပြောနေတာ ဝိုင်းနဲ့ သူ့ကြားမှာ ပြောစရာစကားတွေ ကုန်သွားတယ်။
ဘာကစပြီးပြောရမှန်းမသိအောင်လဲ ခံစားကြရတယ်။ ““ဒီပုံကို ကျနော် တမင်ရိုက်တာမဟုတ်ဘူး”” ““ဝိုင်း နားလည်ပါတယ်ဆရာ”” ““ဒါပေမဲ့ ကျနော် အရမ်းခံ စားလိုက်ရတယ်”” ဝိုင်းက သံယောင်လိုက်ပြီး ရေရွတ် နေမိသည်။ ““ဟုတ်တယ် ဝိုင်း အရမ်းခံစားရတယ် ဝိုင်းရဲ့အလှ အင်း ဝိုင်းရဲ့အလှပဲဆိုပါတော့ ကျနော့ကို ဖမ်းစားနေတယ် ဝိုင်းရယ် ကျနော် မရုန်းနိုင် မကန်နိုင် တော့ဘူး”” ဝိုင်းအလှတဲ့ ဝိုင်းရဲ့စောက်ဖုတ်ကို မြင်လို့ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး လိုးချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ် နေပါတယ်ဆိုတာကို ယခု ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတာပဲမဟုတ်လား။ ဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးခေါင်းဖေါ်ရဲမှာလဲ ဝိုင်း အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုံအောင် စိတ်လှုပ်ရှားနေ မိတယ်။ စားပွဲစွန်းကို အထပ်ထပ်ပွတ်ရင်း ခေါင်းကိုပဲ တွင်တွင်ငုံ့ထားမိတယ်။ ခက်လိုက်တာ ဘာပြန်ပြောရမလဲ။ ““ဝိုင်း .. ဝိုင်းရယ်”” ကတုံကရီနဲ့ သူ့လက်နှစ် ဖက် က ဝိုင်းပုခုံးနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းလေး ဆုတ်ကိုင် လိုက်တယ်။ ဝိုင်းလေ ဆတ်ကနဲ တုံသွားတယ်။ ရုန်းပြစ် လိုက်ရမလား ပါးကို ဖြန်းကနဲ မြည်အောင် ရိုက်ပြစ် လိုက်ရမှာလား ဝိုင်း တဆတ်ဆတ်တုံသော နှုတ်ခမ်း တွေကို ကိုက်ရင်း သူ့မျက်နှာကို မော့ကြည့်မိသည်။ သူ့မျက်နှာက ဝိုင်းထံမှ တစ်စုံတစ်ရာ အဖြေကို မျှော် လင့်တကြီး စောင့်စားဟန် အားနည်းသော မျက်လုံး များနှင့် ကြည့်နေတသည်။ ဘာထူးလဲ .. ဘာူထးလို့လဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေလဲ တဆတ်ဆတ်တုံနေကြတာပဲ .. ““ဝိုင်း ခေါင်းကို ပြန်ငုံ့ရင်း သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို အသာအယာ ဖယ်ချလိုက်ခါ သက်ပြင်းနှစ်ချက် ဆင့်ကဲ ရှိုက်မိ၏။ “ဝိုင်းရယ် .. ကျနော် ရိုင်းသွားသလားဟင်”” သူက စိုးရိမ်တကြီး တုန်တုန်လှုပ်လှုပ်မေးသည်။ ဝိုင်းက ခေါင်းကိုငုံ့မြဲ ငုံ့ကာ စကားမပြန်မိပဲရှိသည်။ တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော ဝိုင်း၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို အနီး ကပ် မြင်သည်အထိ သူတိုးကပ်လာသည်။
နှုတ်ခမ်း ဆိုးဆေး ပါးပါးလှပ်လှပ် ဆိုးထားသောကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီရနံ့ချိုမွှေးမွှေးလေးကို သူရှူရှိုက်မိသွား၏။ တဆက်တည်းမှာလည်း ဝိုင်းကိုယ်နံ့လေးကို သူက ပူးပူးကပ်ကပ်ရရှိလိုက်ပြန်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးများ ဆူကြွှလှုပ်ရှားလာကြသည်။ သူက တံတွေးကိုဂလုကနဲ မြည်အောင် မြိုချလိုက်ရင်း ဒုတိယအကြိမ်ဝိုင်း၏ ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်ခါ မျက်နှာ ချင်းနီးကပ်အောင် ဆွဲယူလိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုသည် နွေးကနဲ ပူးကပ်သွားသည်။ဝိုင်း၏ မျက်တောင်ရှည်ကြီးများ မှေးစင်းကျသွား၏။လက် အစုံကလဲ သူ့ကျောပြင်ကို အလန့်တကြား ဖက်မိသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းထိမိရုံလေးဖြင့် ဝိုင်း တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ခ နဲ တွန့်ကာ အကြောအချဉ်တွေ ပျော့ခွေချင်သွားသည်။ ““ပြွတ်..ပြွတ်”” သူက ဝိုင်းနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို ညင်ညင်သာသာလေး စုပ်ယူလိုက်သည်။ ဖျင်းကနဲ ခံစား လိုက်ရသည်။ ““ချစ်တယ် ဝိုင်းရယ်”” အမောတကောကြီးပြောရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ပြန်၏။ သည်တစ်ခါ သူ့လျှာနွေးနွေးဖြင့် ဝိုင်း နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို တလစပ် ယက်သည်။ စုပ်သည်။ ချိုမြမွှေးသင်းသော နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးလေးများ ပြောင် စင်သွားသည်။ ဝိုင်းက အသက်ကိုအောင့်ထားမိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကို ဝိုင်းမသိ။ မရုန်း မဖယ် မတွန်းမကန်နှင့် တလွန့်လွန့်နေိမိခြင်းကို ဝိုင်း၏ ဆူဖြိုးသန်စွမ်းသော လတ်ဆတ်သည့် သွေးများဆူကြွ လာခြင်း သင်္ကေတပင်ဖြစ်မည်ထင်သည်။ ““အခန်းထဲ သွားကြရအောင် ဝိုင်းရယ်နော်”” သူက တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှား အသံကြီးနှင့် ပြောကာ ဝိုင်းခါးသေးသေးလေးကို ဖက်၍ဆွဲခေါ်သည်။ အခန်းထဲသွားလိုးကြမည်ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှန်း သိ၏။ ပူနေထူနေသောစိတ်နှင့်ခေါင်းကို ငုံ့ထားမိ၏။
ဘာဖြစ်ရတာလဲ ရုန်းပါလား .. ဝေးရာဆီကိုခွာပါလား ဝိုင်း ဟာ သံလိုက်စက်ကွင်းမိနေတဲ့သူလိုပဲ သူခေါ်ရာကို တရွေ့ရွေ့ပါသွားနေမိတယ်။ အမှားအမှန် ဝေဖန်တွေး ခေါ်နိုင်တဲ့ စိတ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပလဲ အို .. သူဝိုင်းကို နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ် ပွေ့တင်၏။ အ လင်းရောင်တသဲ့သဲ့မျှသာလင်းသည်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး က ဝိုင်းအပေါ်သို့ တဖြေးဖြေး အုပ်မိုး ခွစီးလာသည်။ ဝိုင်းမောသည်။ မျက်စေ့အစုံကို မှိတ်ထားလိုက်မိ၏။လက်နှစ်ဖက်က သူ့ရင်ဘတ်ကို အထိတ်တလန့်လေးတွန်းထား၏။ အခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်သား၏ အသက်ရှူသံသည်သာ ပြင်းပြင်းပျပျလေး ထွက်ပေါ်နေသည်။ဝိုင်း ဘာကြောင့်မှန်းမသိ မျက်စေ့အစုံကို ဇွတ်မှိတ် ထား မိသည်။ အသိစိတ်များကမူ သူ ဘယ်နားကိုကိုင်သည် ဘာလုပ်နေသည်ကို သိနေသည်။ သူ့ထံမှ ပူနွေးသော အသက်ရှူရှိုက်သော လေကို မျက်နှာပြင်၌ ထိတွေ့ခံ စားရ၏။ ချိုသင်းသော ယောက်ျားရနံ့တစ်မျိုးကိုလဲ ဝိုင်းရနေ၏။ ခုံလိုက်တာ .. ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ကို မော နေသည်။
သူ့စကားတွေ ပြောနေသည်ဟုတော့ ဝိုင်းထင်၏။ စကားလုံးများက တိုးလွန်း ညင်သာလွန်းပြီး ကြိပ် ၍ပြောသောစကားများဖြစ်၍ မသဲမကွဲလေသံမျှ လောက်သာ တီးတိုးပြောနေခြင်းဖြစ်၏။ တစ်ချို့ကိုလဲဝိုင်းနားလည်သည်။ နားလည်သော စကားလုံးတိုင်း ကလည်း ဝိုင်းရဲ့ရင်ကို ပူနွေးလှိုက်ဖိုစေရုံမျှမက မျက် နှာ တစ်ခုလုံးကို ထူပူစေသော စကားလုံးများသာ ဖြစ်နေ သည်။ ““ဓါတ်ပုံထဲမှာ ဝိုင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကို မြင်ကထဲက လိုးချင်နေတာ သိလား . ဝိုင်း”” ဝိုင်း ထိုစကားကြားတော့ ရှက်လိုက်တာ။ မျက် နှာကို ပြုံးထားရမှာလား မဲ့ထားရမှာလား .. မသိ။ နောက် သူထပ်ပြောသေးသည် ဝိုင်းက မျက်နှာကို တစ် ဖက်သို့စောင်းထားပြီး အံလေးတင်းတင်းကြိပ်ထားရ၏။ ““ကိုယ်တို့လိုးကြရအောင်နော် ဝိုင်း”” ခက်လိုက် တာကွယ် ဘယ်လိုလူလဲမသိဘူး ဟုတ်တယ် ဝိုင်းက အစ်ကို့လီးကြီးကို မြင်ကတည်းက ဝိုင်းလဲခံချင်နေပါ တယ်အစ်ကိုရယ် မြန်မြန်လိုးစမ်းပါလို့ ပြောရမှာလားဟင်း အပျိုရှင့် အပျို အလိုးခံဘို့မပြောနဲ့ ကိုယ့်ဖင်တောင် ကိုယ် ငုံ့ကြည့်ဖူးတာ မဟုတ်ဖူး ယုံလား။ အဲဒီစကားမျိုးတွေ ဝိုင်းပါးစပ်က ဘယ်လိုလုပ်ထွက်မှာလဲလို့ တစ်ခါထဲ သူက မိန်းမရဘူးပြီးသားဆိုတော့ အဲဒီစကားတွေ ထွက်ရဲ ပြောရဲတာပေါ့ အို ကျွတ် နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီး နယ်ပေး နေတယ်။
ဟာအား ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ ရှက်တာလဲလွန်ရောပဲ သူအဲဒီလို လုပ်လေ ဝိုင်းက မျက်စေ့တွေကို တင်းတင်း ပိတ်ထား မိလေပဲ။ လက်ချောင်းတွေက ခေါင်းရင်းက ကုတင်တိုင် ကို စုံကိုင်ဆွဲထားမိတယ်။ လက်ဆစ်လေးတွေဆိုတာ ဖြူ တောင်နေတယ်။ အပေါ်အင်္ကျီရင်ဘတ်ကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြန်ပြီ ဝိုင်း အသဲတွေအေးကနဲ ခံစားလိုက်ရတယ်သိလား နွေးနွေးပူပူ သူ့အာခံတွင်းမှာ နို့သီးခေါင်းလေး တွေကို စို့ပေးပြန်တော့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ဟို ခါးဆီက ဖြင်းကနဲဖြစ်ပြီး အပေါ်ကို ကော့ထောင်လိုက်မိတယ်။ စောက်ပတ်ထဲမှာ ရွစိရွစိဖြစ်ကုန်တယ်။ အဲဒါ ဘာဓါတ်လဲမသိဘူးနော် သိပ်ဆန်းတယ် သိလား ဝိုင်း နို့နှစ်လုံးကနေမထိ လေမထိနဲ့ သန့်သန့်စင်စင်အုပ်ထိန်း လာတာဆိုတော့ စိမ်းစားဥတွလို ဖွေးနေတာ အခွံနွှာ ထားတဲ့စိမ်းစားဥမျိုးပေါ့။ အရွယ်အစားက ဟင်းသောက် ပန်းကန်အလတ်စားတစ်လုံးကို မှောက်ထားသလိုပဲ ခုံးလုံး ပြီး ကျစ်မာနေတာ ..ခွန်ဂျာဆိုတာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း မိန်းမသေပြီးကတည်းက မလိုးရတာ ကြာပြီဆိုတော့ ဝိုင်းရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုက်စားဝါးမြိုပြစ်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေတာ။ ထမီအထက်ဆင်စလေးကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ချွတ်ပြန်၏။ ဝိုင်း၏ အတွင်းခံ ဘရာဇီယာလေးက လည်ပင်း၌ ရောက်နေသလို ထမီကလည်း အောက်သို့လျောဆင်း သွားသည်။ စောက်မွှေလေးများ မစုံတစ်စုံ ပေါက်နေကြပြီဝိုင်းက အမွှေးနဲနဲသန်ချင်သည်။ တင်ပြရန်ကျန်ရှိပါသေးသည်……..
” ပကျြ စီး ပွို ကှဲ ခဲ့ ရ သော “
တု နျ ခါ နေ တဲ့